Ma in la soomo lagu xuso Halacha xusustii Holocaust? (Tiirka 4) – Rabbi Michael Avraham
Ma in la soomo lagu xuso Halacha xusustii Holocaust? (Tixda 4)
18 faallooyin	/ Tu Elul 18 - 09/2016/XNUMX 18 / 09 / 2016
Sannad kasta waxa soo baxa su’aasha ah sababta ay xikmaddu u qaban la’dahay maalin la soomo ama maalin la xuso oo lagu xuso Xasuuqa. Haddii ay soomaan xusuusta dilkii Gedalyaah Ben Ahiiqaam ama jebinta derbiyada ee hareeraynta Yeruusaalem, waxay u badan tahay in maalintaas oo kale waa in la dhigo xusuusta Holocaust, taas oo ugu yaraan ahayd mid aan caadi ahayn oo masiibo ah, iyo anaga oo aad u badan oo la taaban karo oo taabanaya. Jawaabtu waxay inta badan ku wareegsan tahay su'aasha ah awoodda iyo awoodda halak. Qaar waxay ku dheggan yihiin xaqiiqada ah inaanaan haysanin hay'ad u qalma (Sanhedrin) oo u samayn karta maalin ku xidhan Klal Israel. Kuwo kale ayaa taas u nisbeeya yaraanteena (hoos u dhaca jiilasha la xasuusan yahay). Cudurdaarradani waxay u eg yihiin kuwo daciif ah. Haddii Purim Frankfurt ama Casablanca la dejin karo, iyo haddii digirta ama talefannada casriga ah ama telefishinnada la mamnuuci karo, markaa malaha waxaa jira awood oo waxaa jira awood ku filan oo halakhic ah oo lagu soo saaro sharciyo cusub marka loo baahdo.
Kuwo badan ayaa u arka inay tahay Yvonne halaag ah, waxaanan filayaa inay cadaalad cadaalad ah ku jirto. Runtii halkan waxaa ka jirta diidmo laga qabo kan cusub, waaba intaasoo qeexitaannada la jebin. Cabsida dib u habeynta ama Sionism (marxaladda soo socota waxay bilaabi doonaan dabaaldega Maalinta Madaxbanaanida ee Israa'iil). Laakiin waxaan rabaa in aan halkan ku soo bandhigo aragti ballaadhan oo ka duwan, su'aashan.
Waxaan u baxay Imperialism
Cunsurka lagama maarmaanka u ah waxbarashada diineed ee dhammaanteen waa wadarta halligaha. Waxaa la rabaa in ay wax walba koobto, dhulka oo dhan waa la karaameeyay oo meel bannaan ayaa taal. Wax walba, iyo gaar ahaan waxyaabo qiimo leh, waa inay maraan fal-celinta tijaabada halakoolka oo ay sidoo kale iska leeyihiin. Dhinaca kale ee lacagtaasi waa in aanay jiri karin qiyam iyo camal qiimo leh oo aan xalaal ahayn oo ay ka mid yihiin.
Tusaale ahaan, qaar badan ayaa raadinaya odhaahda dhaqan-dhaqaale ee halakhah. Halkhah ma dimoqraadiyad bulsho, ma hanti-wadaaga (tusaale: tani waa jawaabta ugu dhow) mise shuuci? Warka Subaxnimo waxa uu daabacay maqaal si qiiro leh u sheeganaya sida uu yahay hantiwadaaga hantiwadaaga, u ololeeya cadaalada wax qaybsiga, hantiwadaaga, shuuciga iyo wixii la mid ah.
Malaha guud ee jagooyinkan oo dhan ayaa ah in xalaqadu ay hubaal tahay wax ka mid ah kuwan oo dhan. Waxaan jeclaan lahaa inaan halkan ku diido malo-awaalkan guud, oo aan sidaas ku sameeyo laba heer: a. U malayn maayo in laga soo saarayo xalaqada hadal aan madmadow lahayn oo ku saabsan arrimahan iyo kuwa la midka ah. B. Sidoo kale looma baahna in tan la sameeyo. Ma jirto sabab uu Halacha u yeesho hadal noocaas ah. Hadda waxaan isku dayi doonaa inaan wax yar faahfaahiyo.
A. Xalaxadu ma waxay leedahay odhaah cad oo caqiido ah?
Halacha waa halkudhegyo badan oo soo baxay qarniyo badan, meelo badan iyo duruufo kala duwan iyo dad kala duwan. Had iyo jeer iskuma xidhna diyaaradda meta-halachic. Tusaale ahaan, waxaan soo qaadan doonaa xukunnada Maimonides ee mawduuca wacdiga. Xitaa iyaga oo u malaynaya in ay leeyihiin joogteynta halakhic, waxay u badan tahay in aysan ilaalin joogteynta meta-halakhic. Sida la wada ogsoon yahay, waxa khilaaf ka dhex aloosan yahay Beyt Midrash Rabbi Akiva iyo Rabbi Ismaaciil oo ku saabsan habka loo dalbanayo Tawreed (Rish - mid guud iyo mid gaar ah, iyo RA - jamac iyo tiro yar) eeg Shavuot XNUMXa iyo barbar socda. ). Waxa jira dhawr arrimood oo siyaabo kala duwan u keenaya khilaafkan meta-xalaki ah. Maimonides ayaa arrimahaas qaarkood ku maamula hallaqaah, sida aan horeba meel kale ugu soo bandhigayna waxaa soo baxaysa in mararka qaarkood uu u xukumo sida ra’yi xalaal ah oo ku tiirsan wacdi guud iyo mid gaar ah, marna waxa uu u taliyaa sidii ra’yi ku tiirsan jamaca iyo beelaha laga tirada badan yahay. Ma ilaaliso joogtaynta meta-halakhic.
Waxay ila tahay in halakhu guud ahaan uu lahaan karo hal-ku-dheg-is-daba-marineed (tanina sidoo kale waa hadal la buunbuuniyay siday ila tahay), laakiin uma eka inay si joogto ah u taagan tahay meta-halaqic ama fikradeed, ie inay muujiso nidaam, shuuci, hanti-wadaag ama mid kale. mawduuc-hoosaadka dhaqan-dhaqaale. Ilaha kala duwani waxay ina geeyaan gebagebo kala duwan, dhamaantood ma xidhna, kulligoodna ma khuseeyaan xaalad kasta, qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa fasiraado kala duwan laga bixinayaa, sidaa awgeed ma dhici karto in laga soo saaro mishnah nidaamsan. Mararka qaarkood xitaa suurtagal ma aha in la soo saaro xukun xalaal ah oo cad, laakiin waxaa hubaal ah in aanay macno lahayn meta xalaal ah oo nidaamsan.
Waxaa muhiim ah in la fahmo in dhibaatadu aysan ahayn kakanaanta, badnaanta ilaha, ama dhib kasta oo kale oo sidaas samaynta. Waxaan ku doodayaa in ay u badan tahay in aanay jirin wax la yidhaahdo sub. Qof kasta oo ka soo saara mishnah sidan oo kale ah sida ay aniga ila tahay waa ka dhalanteed arrinkaas, ama ugu yaraan ku hawlan hal-abuur tafsiir ah oo muran dhaliyay. Taas oo daliil u ah, umalayn maayo in aan garanayo qof ka mid ah dadka arrimahaas la tacaalaya oo mawqifkoodii mabda’a ahaa bedelay ka dib markii ay daraasad ku sameeyeen xalaqa (marka laga reebo xaalad gaar ah oo ay ka helayaan hadal xalaal ah). Wadahadalka noocan oo kale ah marna uma socdo sidii yool dejineed ka dib fallaadha la toogtay. Qofkii hantiwadaaga waxa uu hantiwadaagnimadiisa ka helayaa kitaabka Tawreed, sidaas oo kale waa hanti-wadaag ama cid kale oo hoos timaada dhaqan-dhaqaale. Tani waxay kor u qaadaysaa shaki weyn oo ku saabsan daacad-darrada caqliga. Dadku waxay u qaataan in ay tahay in ay jirto mawqif dhaqan-dhaqaale oo aragti ahaan, waxay helayaan mawqif noocaas ah dhexdooda, ka dibna waxay bilaabaan inay sameeyaan hal-abuurnimo tafsiir ah oo aan la qancin, odhaahyo xul ah oo laga soo xigtay ilo la doortay iyo wixii la mid ah, si ay u helaan wax adag oo ka baxsan jaahwareerkan fowdada ah.
Waxaan ku dari doonaa su’aal kale oo cidhifyada ereyadayda ah: Haddii aan runtii ku guulaystey in aan xalaasha ka soo saaro qayb-fikrad dhaqan-dhaqaale oo nidaamsan, miyay taasi igu waajibinaysaa? Xaqiiqda ah in sharciyada qaar ay hoosta ka xariiqayaan fikrado dhaqan-dhaqaale oo gaar ah qasab iguma aha in aan qaato. Waa la iga go'an karaa oo aan dabaqi karaa sharciyadan (haddii dhab ahaantii ay ku xiran yihiin) aniga oo aan qaadan fikradda hoose. Macnuhu waxa weeye, haddii ra'yigani leeyahay gabagabo dheeraad ah oo aan ku qeexnayn halku-dhig ahaan - anigu ma dareemayo waajib. Ugu badnaan waxaan dhihi karaa anigana waxaan leeyahay iswaafaqla'aan-meta-halachic. Waxaan mar hore tusay in aan arrintaan ku wanaagsanahay, maya?
Waxay iila muuqataa in xitaa haddii xalaqadu ay dardaaran ka leedahay meelahaas, hadalka ugu daacadsan ee aan ka odhan karaa waa in xalladu innaga baahan yahay in aynu caqli galno oo u dhaqanno si hufan oo macquul ah. Hadda laga bilaabo, qof kastaa wuxuu go'aan ka gaarayaa naftiisa waxa macno leh iyo waxa macquul ah oo dejinaya aragtidiisa dhaqan-dhaqaale. Aragtidaasi waa dardaarankii Tawreed iyo Halaka ka yimid. Laakiin tani waa dabcan kaliya heerka koowaad, ilaa inta aan ka qaadanayno in ay jiraan rabitaan xalaal ah oo naga yimaadda meelahan oo kale. Hadda waxaan u gudbi doonaa heerka labaad.
B. Ma tahay in mawqif cad oo fikireed laga helo aragti ahaan?
Hadda waa in aan iswaydiino sababta ay dhammaanteen ugu maleynayo in ay jirto mawqif fikradeed aragti ahaan su'aalahan? Anigu ma fahmin imbaradooriyaddan halakhinka ah, iyo sida ugu wanaagsan ee aan xukunkayga u qabo biyo ma qabo. Ma jiro jagadaas mana aha in uu jiro. Ma aha oo kaliya sababtoo ah xalaqada waxay ku dhacdaa inay la tacaali weydo su'aalahan, ama ay adag tahay in boos laga soo saaro dhibaatooyin kala duwan (ibid.), laakiin malaha sababtoo ah (= wadajirka halakhic?!) sidoo kale waxay doorteen (malaha si miyir la'aan ah). ) in aan lagu mashquulin oo aan la go'aamin. Iyadu uma aragto shakhsiyadiisa, sidaas darteedna waan ka tagayaa iyada.
Waxaan jeclaan lahaa inaan halkan ku soo bandhigo qoraal ka duwan kan la aqbalay. Dhammaanteen waxaan nahay bini'aadam, oo qayb ka mid ah kooxda bani'aadamku waa Yuhuud. Yahuudigu marka hore waa qof ka dibna Yuhuudi, sida Moharram Tzitzaro Zatzokal u yiri: "Wax bani'aadam ah iguma aha shisheeye" (ibid., Ibid.). Isla mar ahaantaana kala qaybintan u dhaxaysa labada dabaq, waxa kale oo suurtogal ah in loo qaybiyo qiimaha adduunka (Yuhuud !?) laba dabaq: 1. Dabaqa caalamiga ah, oo ka kooban qiyam caalami ah oo hal dhinac ah iyo qiyamka shakhsi ahaaneed kale. 2. Dabaqa xun ee gaarka ah ee Yuhuuda.
Dabaqa kowaad wuxuu ka kooban yahay qiyam aan loo baahnayn in lagu daro Halacha. Qaar waxa ay xidhaan wax kasta oo aduunka ka jira oo aan ahayn Yuhuuda (caalamka) oo kaliya, qaarna waa in jiritaankooda loo sameeyo si iskaa wax u qabso ah iyo si gaar ah oo aan loo samayn si isku mid ah oo dhammaanteen nagu xidhan sida looga baahan yahay maxsuulka xalaasha ah.
Kaftanka waxaa loo yaqaan magaca Raabi oo ka yimid Ponivez kaas oo sudhay calan saqafka sare ee Ponivez yeshiva ee Bnei Brak Maalin kasta oo Madaxbanaanida sidoo kale ma dhihin codsi, laakiin ma dhihin ammaan. Markuu Ilaah ka sheegay in uu ahaa Sionist sida Ben-Gurion, Ben-Gurion ma odhan ammaan ama baryi. Dad badan oo ultra-Orthodox ah oo aan maqlay ayaa aad ugu maaweeliya kaftankan iyaga oo ka duulaya nacasnimada iyo shariyiinta Sahyuuniyadda, laakiin uma maleynayo inay gunta u galeen macnaheeda. Raabbigu ujeeddadiisu waxay ahayd inuu sheego inuu yahay Sionist cilmaani ah, sida Ben-Gurion oo kale. Sionism-kiisu maaha mid diineed, laakiin waa qiimo qaran, sidaas oo kale ayuu u heellan yahay xitaa iyada oo aan la gelin halakhah. Maalinta madax-bannaanida waa fasax qaran oo cilmaani ah oo uu u dabaaldego rabbaiiga Ponivez, mana uusan wax dan ah ka lahayn inuu siiyo dabeecad diimeed oo uu ku dhejiyo qawaaniinta halakhic.
Ku laabo Maalinta Xuska Holocaust
Maanta, reer binu Israa'iil waxay siyaalo kala duwan u xusuustaan ​​Holocaust, kuwaas oo qaar ka mid ah ay ku qoran yihiin sharciga iyo dhaqanka guud ee bulshada iyo qaar ka mid ah kuwa gaarka ah. Dariiqooyinkan oo kale waxay iila muuqdaan kuwo si buuxda loogu qanacsan yahay, mana helin baahi ama sabab aan ugu dhejiyo xeerar xalaal ah, xitaa haddii maanta ay jirto hay'ad karti leh oo taas samayn karta. Waxay ka tirsan yihiin dabaqa koowaad ee labadan kor ku xusan, mana jirto sabab loo raro kan labaad. Maalinta Xuska Holocaust waa maalin qaran oo aan lahayn dabeecad diineed, taasna waxba kama jiraan. Ma luminayso qiimaheeda, runna maaha in wax kasta oo qiimo leh lagu daro qaab-dhismeedka xalaasha ah ama xitaa diinta.
Sidaa si la mid ah maalinta xornimada waxaan hubaa in aan leeyahay Alxamdulillaah, Alla mahad leh, laakiin uma arko maalin qiimo diineed leh oo hubaal ah in aan xalaal ahayn. Macnaheeda waa qaran, aniguna sida Sionist cilmaani ah (sida Rabbi of Ponivez iyo Ben-Gurion) ayaa ku biiraya saldhiggan oo keliya. Anigu ma odhanayo Hillel sababtoo ah Chief Rabbinate ayaa xukumay in Hillel la yidhaahdo, tani maahan sababta oo ah xidhiidhka caanka ah ee aan la leeyahay hay'addan. Waxaan leeyahay ammaan sababtoo ah waxaan u maleynayaa inay sax tahay oo ay wanaagsan tahay in sidaas la sameeyo. Middaani waa dariiqa aan ku muujinayo mawqifkayga qaran ahaan.
Haddaba maxaa waagii hore ahaa?
Waagii hore, waxay dhab ahaantii ku dhejin jireen qiimo kasta iyo waajibaad kasta oo qiimo leh oo ku jira xalalka. xikmado iyo maxkamd waa kuwa dhigay maalmaha soonka iyo rayraynta iyo wakhtigeena. Laakiin waxaan u maleynayaa inay tahay natiijada xaalad macmal ah oo aan boqor ka jirin Israa'iil. Qoraaga wacdiga rabbaaniga wuxuu ka hadlayaa laba nidaam oo dawladeed oo isbarbar socda, boqorka iyo maxkamad. Sababo qaar ka mid ah ilaha xikmadda ku dhawaad ​​wax tilmaam ah nidaamka boqorka lama arko. Maxkamad ayaa dayactir ku sameyneysa waddooyinka waqtigii loogu talagalay (sub-MOC), taasoo la macno ah inay ahaayeen Wasaaradda Gaadiidka. Waxay wax ka beddelaan xeerar waxayna dejiyaan habraacyo, xeerarka codbixinta ee bulshada waxaa lagu go'aamiyaa halakhah waxayna ka muuqdaan Shulchan Aruch. Dabcan, waxay sidoo kale u baahan yihiin ogolaanshaha qof muhiim ah (= garqaade). Laakin waxaan filayaa in ay ka dhalatay in Toshba'ap la aas aasay wakhti aan Israa'iil boqor ka jirin, taladii dawladdii cilmaaniga ahaydna ay ka gudubtay boqorka una gudubtay BID-da wayn. Haddaba taliyayaashii shirkadu waxay ahaayeen farcankii Daa'uud, maxaa yeelay, iyagu waxay ahaayeen boqorro. Intaa ka dib ilaa maanta waxaynu la qabsanay in aanay jirin heer qaran oo cilmaani ah oo wax walba ay leeyihiin gar-qaadayaasha iyo maxkamadaha iyo cabbirkeena diineed iyo xalaalnimo. Halkii uu boqorku go'aamin lahaa dhaqankeena wixii ka baxsan halakhah, BD wuxuu garaacaa oo ciqaabaa xaqdarro. Awoodda BID waa mid ka tarjumaysa awoodda boqorku ku leeyahay dawladii asalka ahayd.
Iyada oo qayb ka mid ah isla shay aan la qabsannay in wax walba ay ahaayeen Tawreed wax walbana ay socdeen. In aysan jirin nolol caadi ah oo bini'aadmi ah, oo hubaal ah in aysan jirin wax qiyam ah, oo ka baxsan hal-abuurka. In wax walba lagu dhaqmo oo ay go’aamiyaan gar-qaadayaal iyo culimo. Laakin maanta waxaa jirta fursad aad ku soo noqon karto caadi. Dadka reer binu Israa'iil waxay leeyihiin cabbir qaran oo cilmaani ah BH (BH maaha cilmaaniyad laakiin soo noqoshada cabbirka cilmaaniga ah ee nolosheenna oo dhan. Qaar waxay ku tilmaameen soo noqoshada marxaladda taariikhda). Ma jirto sabab aan ugu sii adkaysanno qaabka aynu caadaysanay sababo la xidhiidha cudurro taariikheed oo kala duwan.
Gebagebadii, si ka soo horjeedda fikradaha jira, dibad-joogtu kaliya kuma koobnayn beerta halakhah (inkasta oo tani ay sidoo kale ka dhacday qaar ka mid ah) laakiin sidoo kale waxay sii kordhisay wax ka baxsan barashada saxda ah ee qaybaha kale. Qofku waa inuu ku soo noqdaa caadifad oo yuusan si qotodheer uga werwerin heerka halakhah iyadoo la tixraacayo boqortooyadu iyada iyo waaxaheeda oo ha u ogolaado inay baalasheeda hoosteeda ku haysato dhammaan meelaha nolosheenna. Si aan u qeexno ilmaadeerteena Masiixiyiinta ah, yeynan gelin cadaabta: sii sharciga waxa uu leeyahay, iyo boqorka (ama nin) waxa uu haysto.
Xagga Xorriyadda Hadalka, Diidmada Holocaust iyo "Waa inaadan sugin" (Tiirka 6)
Sharciga Hantida ee Halacha iyo Sharciga
Qoondada Holocaust iyo Qaybta - ilaa Adi Ofir (Buugaagta Haaretz - 2001)
18 Fikirka Ku Saabsan "Ma in Halaka lagu soomo xusuustii xasuuqii? (Tirada 4)
29 Elul 09 - 2016/14/53 saacada XNUMX:XNUMX
Miyaadan u malayn in inkasta oo mishnah nidaamsan aan laga heli karin Halacha sida loo qaabeeyey qarniyadii hore, haddana mid ka mid ah ayaa laga heli karaa ugu yaraan lakabka Tawreed ee qoran? Waxaan ku dhex arkay kitaabkaaga Ilaahay oo ciyaaraya laadhuu in aad leedahay Baybalku maaha mid ku saabsan qiyamka akhlaaqda ee wuxuu ku saabsan yahay qiyamka diinta. Yacni, sida hadalkaaga (sida ugu wanaagsan ee aan u fahmay) dhammaan diinta Yuhuudda, Tawreed qoran iyo Tawreed afka ah waxay ka tirsan yihiin lakab ka soo ifbaxay nolosha caadiga ah ee aadanaha oo ku dhaca qaybta "diinta". Oo waxaan waydiiyaa waa maxay qaybtaas "diinta", maxay ka dhigan tahay? Kaliya wax gar-daran oo aan caqli-gal ahayn qofka ilaalinaya? Iyo in qof kasta oo u maleynaya in ay jirto dhibic ku jirta mitzvos macnaheedu maaha in la dhigo heer caadi ah oo la xidhiidha ninka / bulshada / bini-aadmiga? Taasina, tusaale ahaan, waa wax aan macquul aheyn in laga soo saaro mitzvah ee mabaadi'da dhaqaalaha shemita sida Jabotinsky sameeyey?
Waxay u muuqataa in tallaabada halkan lagu soo bandhigay ay tahay in la sii wado hal tallaabo oo dheeraad ah. Aniga ahaan, masaafurinta kaliya ma abuurin imbaraadooriyad diinta laakiin waxay guud ahaan abuurtay qaybta diinta, lakab ka maqan Kitaabka Quduuska ah. Awaamiirta waxaa loo bixiyay danta qaranka marka hore iyo "in sidaas lagu sameeyo dhulka dhexdiisa." Waxaan filayaa in soonka aan hadda qabanayna ay tahay in sidoo kale loola dhaqmo sidaad sheegtay inaad u daaweyso Maalinta Xuska Holocaust maanta, oo heer qaran ah.
Waxaan jeclaan lahaa tixraacaada.
Waxaan filayaa in marka hore xaqiiqadu aanay helin. Isku dayada la sameeyay runtii waa kuwo aan lagu qanci karin. Waxaa muhiim ah in aan la iska indha tirin xaqiiqada oo aan ka hooseyno rabitaankeena (xitaa haddii ay mudan tahay iyo wanaag). Waxaan u maleynayaa in xitaa Tawreed qoran ay tahay mid aan caadi ahayn. Dabcan qiyamka caalamiga ah ee qof kastaa ku heshiiyo waxaad ka heli doontaa meel kasta. Laakiin daraasad ku saabsan Tawreed ama Halacha waxba kama beddeleyso fikradaha aad adigu dejisay (tani sidoo kale waa xaqiiqo ra'yigeyga ah, in dadku helaan waxay rabaan).
Waxaan ku raacsanahay in Sages aysan jirin farqi u dhexeeya anshaxa iyo diinta iyo laga yaabee sidoo kale Rishonim. Macnaha marka la eego musaafurisku waxa uu abuuray kala soocidan (iyo guud ahaan, taariikhda halaxahku waa abuurista kala soocis aan hore u jirin. Ugu dambayntii waxa ay samaysaa fikrado aan ku jirin mishnah iyo wixii la mid ah). Laakin sida ay aniga ila tahay waa tibaax in dunidu ay hore u socoto (oo aanay dib uga laabanayn). Waxaan hadda fahamsanahay in ay jiraan laba nooc oo qiyam ah, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah sayidkeenna ay u kala garteen iyaga. Tilmaanta tan (oo naga caawinaysa inaan ogaano waxay garan waayeen) ayaa ah inaynu aragno maanta inay suurtogal tahay in la akhlaaqdaado xitaa haddii aan loo heellan diin. Haddaba maxaad u malaynaysaa in ballan-qaadka diineed loola jeedo ujeeddooyin diimeed? Aragtidaani maanta waa mid xad dhaaf ah.
Sida tarjumaadda ujeedooyinka diinta, waxaad u maleyneysaa in aysan jirin wax qiyam ah oo ka baxsan qiyamka anshaxa. Tani waa male aan sal u arkin, oo hubaal maaha marka la eego Tawreed iyo Halacha. Qayb aad u badan oo ka mid ah arrimaha waxa ay iila muuqataa in aan la heli karin caqli-galnimada akhlaaqda. Haddaba maxay tahay sababta loogu malaynayo in qof walba loogu talagalay akhlaaqda? Fikradayda waxaa mar kale ku dheggan rabitaanka qalbiga iyo ixtiraam la'aanta xaqiiqooyinka.
1. Way caddahay in alibi de cilmi-baarista Baybalka, haddii Kitaabka Quduuska ah uu yahay laakiin kala duwanaansho kala duwan oo matalaya dugsiyo iyo aragtiyo kala duwan, ma jiraan wax laga hadlo. Laakiin haddii aan aqbalno cabbirka muujinta ee Kitaabka Quduuska ah, runtii aragtidayda mawqif gaar ah ayaa la dejin karaa ama lagu sifayn karaa iftiinka daraasadda aayadaha. Tusaale ahaan xidhiidhka Baybalka iyo boqortooyada waa arrin aan filayo in si dhab ah looga doodi karo falanqaynta tafsiir adag. Tusaale ahaan, waxaan u malaynayaa Maimonides, oo ku arkay maxkamadaynta boqorka warqad magacaabista boqorka ee Israa'iil, wuxuu iska indho-tiray macnaha fudud ee cutubka oo dhan. Waxaa laga yaabaa inaanan ku qancin kan kale ee huba mawqifkiisa (maxaa yeelay malaha ma qancin doono Dawkins) laakiin hubaal, waxaan u maleynayaa in daraasadda kitaabiga ah ay horseedi karto fikrado cusub oo ku saabsan arrimo badan. Guud ahaan aragtidayda waa in aan la iska hor imanayn akhlaaqda aadanaha iyo waxa ku qoran Tawreed sidii uu Ibraahim uga qayliyey halaagga Sodom. Sidaa darteed waxaan u maleynayaa in runtii Kitaabka Quduuska ah oo keliya uusan ku filneyn in laga abuuro fikrad anshaxeed meel eber ah laakiin wuu caawiyaa.
2. Maan fahmin in ay macquul tahay in akhlaaq la’aanteed go’aan diineed la’aanteed ay muujinayso in ay jiraan laba qaybood. Ma sheeganayo in kaliya diinta ay tahay akhlaaqda laakiin hubaal ah in ujeedada mitzvos ay ka tirsan tahay isla qaybta. Xaqiiqda ah in qofku uusan mar walba awoodin inuu fahmo dhadhanka mitzvos uma baahna qaadashada qaybta "diineed". Mararka qaarkood waxaa naga maqan macnaha guud ee taariikhiga ah si aan u fahanno waxa lagama maarmaanka u ah, laakiin tani macnaheedu maaha in sababta akhlaaqdu aysan jirin. Gaar ahaan maadaama aadan weli i siin qeexitaan togan oo ah "qiimaha diinta." Halkaa marka ay marayso, anigu ma qaadan karo in ay jirto qayb "diineed" oo aanan garanayn waxa loo "dhamaystiro godad".
1. Waa in aanu jirin wax iska hor imanaya, laakiin su'aashu waxay tahay in ay suurtogal tahay in dib loo cusboonaysiiyo. Qofku ma ogaan karaa barasho Kitaabka Qudduuska ah oo uusan raali ka ahayn oo ma beddeli karaa aragtida ka dib daraasaddiisa. U malayn maayo inay taasi dhacdo. Abarbanel oo diiday boqornimadiisa wuxuu ra'yigiisa ka helay Kitaabka Qudduuska ah, Maimonides oo aan diidin wuxuu helay uurkiisa. Maantana sidaas oo kale ayaa jirta.
Waxaa cad in daraasad kasta oo goob kasta iyo buug kasta ama filim kasta ay furto su'aalo oo bedeli kara fikradaha. Laakiin isbeddelka waxaa lagu samayn doonaa hab gudaha ah oo aan ku imanayn awoodda Kitaabka Quduuska ah (in maadaama aan helay gabagabo ka duwan halkaas waxaan naftayda ku qasbayaa inaan beddelo mawqifkayga ku saabsan arrimaha qaarkood).
2. Ma hayo qeexitaan qiimo diineed. Laakiin tusaale ahaan waxaan leeyahay dacwadda lagu soo oogay xaaska Cohen ee la isku dayay in ay ninkeeda ka goyso aniga ilama aha mid lagu soo oogay ujeeddo akhlaaqeed. Ujeeddadeedu waa in la ilaaliyo quduusnimada wadaadnimada. Tani waa hadaf diineed iyo akhlaaq darro. Xataa mamnuucida cunista hilibka doofaarka aniga ilama eka mamnuuc ujeeddadeedu waa akhlaaq. Had iyo jeer waxa la odhan karaa waxaa jirta ujeeddo akhlaaqeed oo aynaan wada fahmin. Tani waa hadal madhan, mana arko sabab aan sidaas ugu fekero.
Dooddaydu waxay ahayd haddii ujeedada mitzvos ay tahay mid akhlaaq ah, markaa mitzvos-yadu waa xad dhaaf (ugu yaraan maanta). Midda kale, hadaf akhlaaqeed la’aantood waa la gaari karaa (taasna waxaan daliil uga keenay dad akhlaaq leh oo aan xalaal ahayn). Haddaba maxaa ka dan ah ilaalinta sharciga? Akhlaaq ahaan oo ku filan.
1. Laakiin maanta waxaan iman karaa oo aan go'aan ka gaari karaa khilaafka u dhexeeya Maimonides iyo Abarbanel waxaanan go'aamin karaa in fikradda Maimonides ay u muuqato mid ka fog fududaynta aayadaha marka loo eego qalabka tarjumaadda ee daraasadda kitaabiga ah. Tani dabcan macnaheedu maaha in aan si toos ah naftayda u qasbo laakiin sida aad na bartay (sida aan u fahmay) marka loo eego habka synthetic ma jiro wax la yiraahdo beddelaad mawqif ah oo toos ah oo doodaha ah ee kaliya habka hal-abuurka. Sidaa darteed waxaan u maleynayaa in u fiirsashada aayadaha iyadoo la aaminsan yahay in kani yahay qoraal awood leh ayaa dhamaadka geeddi-socodku go'aansan karaa isbeddelka aragtida.
2. Mar labaad ma fahmin sababta abuurista qayb aan lahayn qeexitaan ay uga madhan tahay dooddayda oo ah inaynaan ku guulaysan dhammaan faa'iidooyinka amarrada. "Qiimaha diinta" ilaa hadda waxba aniga igama dhigna, runtii waxay u muuqataa inay buuxisay godad. Marka la eego su'aasha ah sababta loo ilaaliyo mitzvos haddii ay suurtogal tahay in ay noqoto mid anshax leh iyada oo aan lahayn mitzvos. Waxaan u maleynayaa in ay suurtagal tahay in laga jawaabo in mitzvos ay suurtogal tahay in ay noqoto mid akhlaaq badan, ama tani waa waxa xikmaddu ay ula jeedaan markii xikmaduhu ay yiraahdeen "mitzvos waa madhan mustaqbalka soo socda". Anigu shakhsi ahaan waxaan u maleynayaa in runtii qaar ka mid ah mitzvos ay daaliyeen kaalintoodii taariikheed sida addoonsiga iyo qaar weli sugaya xaqiijintooda.
1. Kadibna go'aanso. Su’aashu waxay tahay maxaa u qancin la’yahay kuwa idinka fikir duwan? Sidaa darteed waxaan ka shakisanahay awoodda aan ku samayn karo fikradaha iyo qiyamka Baybalka iyo Halacha. Adiga ayay kula mid tahay Abarbanel laakin waxaa ii cad in ay tahay in aadan boqor ahayn. La hadal royalty oo waxaad arki doontaa inay soo saaraan calaamado waxayna tusaale u yihiin fikrado liddi ku ah (taasoo lid ku ah waxa aad qorto fikradayda ayaa meel leh). Laakiin su'aasha boqorku waa tusaale xun, waayo Tawreed ayaa si cad u tilmaamaya. Waxaan ka hadlayaa su'aalo xalaal ah iyo kuwo mabda'a oo aan caddayn. Si la mid ah waxaad sidoo kale ii keeni kartaa in Tawreed ay u doodo rumaysadka Gd.
Si fudud u qaado, xaqiiqadu waxay tahay in aanay keenin isbeddel xagga aragtida ah.
2. Xaqiiqda ah in shay uusan lahayn qeexitaan macnaheedu maaha in aysan jirin wax faa'iido leh oo laga hadlo (oo aan ahayn kuwa wax-soo-saarka leh). Erayada Muharram R. Piersig waxaa lagu yaqaan buugiisa Zen iyo Farshaxanka Dayactirka Mootooyinka ee qeexida fikradda tayada, iyo xaqiiqda ah in Giriigga (xun) ay maskaxdeenna ku garaaceen xaqiiqda ah in wax walba ay tahay in la qeexo. . Haddii aad u maleyneyso inaan u maleynayo inaad gaari doonto gabagabada inaadan garanayn sida loo qeexo fikradda qiimaha akhlaaqda sidoo kale. Ma jiro fikrad aasaasi ah oo la qeexi karo. Waxaan kuu keenay tusaale qiimo diini ah: xurmada wadaadnimada, xurmada macbudka iyo wixii la mid ah.
Waxaad keentay tusaale ahaan addoonsiga, laakiin noloshaad u fududaysay naftaada. Waxaan ka hadlayaa inta badan Tawreed iyo Halacha. Kaalintoodii ma ay buuxin, laakiin weligood qiimo akhlaaqeed may lahayn. Haddaba maxay u yihiin? Waxaad sheegaysaa odhaah aragtiyeed oo ah in mitzvos uu qofku noqon karo mid akhlaaq badan. Wax calaamad ah uma arko. Ma aha in baaritaanka mitzvos iyo la qorsheeyey (inta badan waxba kuma laha anshaxa), ama in la eego xaqiiqada lafteeda. Sidaa darteed aragtidayda kuwani waa kuwa ugu badan ee qalbi-jabka ah ee maaha aragti miyir-qab ah oo xaqiiqda ah.
29 Elul 09 - 2016/14/54 saacada XNUMX:XNUMX
Inta aan ogahay, waxaad u aragtaa in dhismihii dawladnimo ay tahay dhacdo dabiici ah (Ilaahay faragelin la'aan). Hadday sidaas tahay, waa maxay ammaanta Eebbe ee lagu sheegi karo macnahan?
Runtii, waxaan fahamsanahay in maanta aysan jirin wax Alle ku lug leh taariikhda, kaliya maaha in la dhiso dowlad (oo xitaa haddii ay jirto ma hayo si aan u ogaado meesha iyo goorta ay dhacdo). Sidaa darteed, marka ay dhacdo wax farxad leh (= "mucjiso"?) Waa fursad kaliya in la yiraahdo ammaanta sida qirashada abuurista adduunka iyo abuurkayga.
29 Elul 09 - 2016/14/55 saacada XNUMX:XNUMX
Maan fahmi karin fikradaada, waa maxay farqiga u dhexeeya ballanqaadka "Dina Damlakhuta Dina" kaas oo ku qotoma oo ansax ah halakhah xitaa hoos yimaada xukunka quruumaha ee dibad-baxa, iyo xaaladda maanta, Waayo, meelo dheeraad ah iyo qiyamka caalamiga ah. iyo wixii la mid ah?
Maan fahmin su'aasha
Waxaan hadalkaaga qayb ka mid ah ka soo qaadanayaa: “Arrintan oo kale, waxa aynu la qabsannay in wax walba ay Tawreed yihiin, wax kastana ay yihiin Halacha. In aanay jirin nolol caadi ah oo biniaadmi ah, oo hubaal ah in aanay jirin wax qiyam ah, oo ka baxsan halakadda. In wax walba lagu dhaqo oo ay go’aamiyaan gar-qaadayaal iyo culimo. Laakin maanta waxaa jirta fursad aad ku soo noqon karto caadi. Dadka reer binu Israa'iil waxay leeyihiin cabbir qaran oo cilmaani ah BH (BH maaha cilmaaninimada laakiin waa soo noqoshada cabbirka cilmaaniga ah ee nolosha dhammaanteen. Qaar waxay ku tilmaameen soo noqoshada marxaladda taariikhda). Ma jirto sabab aan ugu sii adkaysanno qaabkii aan caadaysanay sababo la xiriira cudurro taariikheed oo kala duwan. Taasna waxaan weydiinayaa: ka dib oo dhan, xitaa xilligii "dambiyadayada aawadood ayaa nalooga masaafuriyey dhulkayaga", xitaa markaas waxaan ku hoos jirnay qaar ka mid ah xeerar kuwaas oo go'aanadooda (kuwaas oo sidoo kale ka soo jeeda qalabyo ka baxsan sharciga) waxaan lahaa sharci xalaal ah. , ilaa inta lagu daray qaybta "Dina Damlakhuta Dina", markaa waa maxay cabbirka Muhiimka ah ee lagu daray fikradda?
Waxaan rajeynayaa in aan hadda wax badan naftayda u caddeeyay.
waan fahmay. Laakin in dad kale laga hoos taliyo waa mid dhib nagu ah oo aan la rabin. Waa run in Dina Damlakhuta ay leedahay ansax xalaal ah, haddaba waa maxay? Taasi miyay la macno tahay inay wanaagsan tahay in lagu hoos noolaado gidaarka Franz Josef? Farxaddu waxay tahay in aan ku soo laabannay maaraynta nolosheenna nafteenna ee maaha in ay leedahay sharci xalaal ah.
Aad baad ugu mahadsantahay inaad wax caddeyso! Waxaad heli doontaa amarrada iyo xoog toos ah.
29 Elul 09 - 2016/14/58 saacada XNUMX:XNUMX
Haddii Soonku ahaan lahaa mid qaran oo kaliya ma kula tahay inay badbaadi lahaayeen? Xaflad lagu qabtay aag dowladeed ma beddeli kartaa ducada lagu tukado sunagog kasta?
Holocaust waa dhacdo aad uga xoog badan tobanka bisha Tevet ama soonka Gedalyaah. Aragtidayda waxaan shaki ku jirin in sida ugu wanaagsan ee loogu gudbin karo jiilasha soo socda ay tahay maalin baroor diini ah oo sida caadada u ah maalin soon ah. Immisa taqaan (diineed) ah ayaa yaqaan Boqor Yeehuu? Oo intee baa garanaysaa Gedalyaah Ben Ahiiqaam?
Maxaa la sameeyaa? Yuhuuddu waxay si fiican u xusuustaan ​​waxyaalaha la xidhiidha cuntada, hadday tahay fasax ama soon. Taariikhdu waxay ina tusinaysaa in ay aad uga sii fiican tahay. Iyo caddaynta in mid ka mid ah ciidaha qaranka Yuhuuda aanu ka badbaaday (Megilat Ta'anit) marka laga reebo taariikhihii la aqbalay ee Halacha.
Tani waa sheegasho qalabeed. Waxaan la tacaalayaa su'aasha ah in halakuhu u baahan yahay ama filayo in la sameeyo maalintan xusuusta ah. Su'aasha ah maxaa waxtar badan ayaa ka duwan oo waa in si gaar ah loo falanqeeyaa.
Marka la eego su'aasha labaad, fikradaydu waxay tahay in haddii ay illoobaan - way illoobi doonaan. Mar arrimuhu way fogaadeen oo way yaraanayaan (ma ii muuqato runtii maanta inaan xasuusto Gedalyaah ama Yeehuu). Hadalkaagu waxa uu ku salaysan yahay aragti baahsan oo ah in diinta iyo xalaashadu ay tahay in ay bixiyaan adeegyo u adeega qiyamka aadamiga ee qaranka iyo caalamkaba. Kuma raacsani taas.
29 Elul 09 - 2016/15/01 saacada XNUMX:XNUMX
Tan iyo waagii aad Yeruusaalem wax ku bari jirtay, waxaan waxyaalo badan kaa maqlay saaxiibbadii Rabbi Uurii'eel Iitaam.
Waxaan si xamaasad leh u akhriyay maqaalkaaga ku saabsan soonka Maalinta Holocaust, waxaan ku raacsanahay waxyaabaha ugu badan.
Waxaan marar badan ka maqlay Rabbi Amital: "Wax walba ma aha ra'yi Tawreed." "Wax walba uma baahna in laga sheego Da'at Tawreed" iyo qaar kale oo badan
Ku farxa erayadaada ku saabsan ammaanta maalinta madax-bannaanida.
Sidee ku dhici kartaa in la yidhaahdo ammaan mucjiso dhacday oo la yidhaahdo macno diineed ma laha? Mise maan fahmin waxaad leedahay.
Waxaan jeclaan lahaa sharraxaad.
Ka fakar hadalka abuuray ( si loo kala saaro) ka dib markaad musqusha gasho. Ictiraafka Ilaahay ee ah inuu godadkayga furay miyuu leeyahay cabbir diimeed? Quraacda aan ku salaamo ka hor iyo ka dib ma leedahay muuqaal diimeed? Aniga wadanku wuxuu ila mid yahay musqulo ama quraac.
Xagga ammaanta mucjisada, taasi waa su'aal kale. Aragtidaydu waxay tahay in aanay maanta jirin wax mucjisooyin ah (ama ugu yaraan ma jirto wax calaamad ah oo muujinaya inay jiraan), mana jirto ku lug lahaanshaha Eebbe adduunka oo dhan. Marka ay inagu dhacaan dhacdooyin lagu farxo, sida dhismihii dawladnimo, waxay sabab u tahay in Ilaahay loogu mahadnaqo abuurista adduunyada iyo abuurkeenna. Laakiin waxaan ku balaadhin doonaa Gaza (?) Buug aan hadda wax ka qorayo fiqiga hadda jira.
Balse ma awood u leenahay in aan ku saxno barakada nafteena maalinta xoriyada awgeed?
Tani waa in laga wada hadlaa. Ugu yaraan hababka qaarkood (Meiri) waa sharci in la yiraahdo ammaanta mucjiso kasta oo badbaadada iyo qirashada, ka dibna waxay u muuqataa in qofku u duceeyo xitaa iyada oo aan sharci gaar ah lahayn. Sida barakada cunista tufaax mar kasta oo aan cunno oo aynaan barako ku hagaajin tufaax kasta.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa hubaal ah in aan la xaddidin ammaanta duco la'aanteed.
Oo waxaa jirta meel wanaagsan oo Sabra ah oo xitaa duco leh aysan jirin xad. Haddii reer binu Israa'iil ka dib mucjisadii Chanukah ahaayeen in la yidhaahdo Hallel in barakada ka naftooda oo aan xeerin xikmad, iyo in ay jirto dhibaato ah in? Qaar ka mid ah kuwii hore ayaa sidoo kale lagu barakeeyey caado, oo arrintan waxaa jira dood ku saabsan barakada ammaanta lafteeda. Laakiin taas waan ka walaacsanahay, iyo wixii la mid ah.
Way igu adag tahay inaan u arko Dawladda Israa'iil inay tahay "adeeg."
Reer binu Israa'iil waxay ku noqdeen Israa'iil 2000 oo sano ka dib. Waxaa aad u xun in aan gobolka la dhisin 20 sano ka hor….
Mahadsanid gobolka waxaa jira kooxaynta kaararka boostada. Dawladdii madaxa bannaanayd waxay dib ugu soo noqotay dadka Israa'iil. Tibaaxaha ku jira xikmadda waxaa loogu yeeraa "maalmihii Masiixa."
Ammaantu maaha mucjiso kaliya ee waa badbaadada
Mucjisadu maaha oo kaliya jabinta shuruucda dabiicada ee waa jabinta shuruucda taariikhda ama caqliga.
Xagee baynu ku tilmaanay kiis ay dadkii ku kala firdhiyey dhulka darafyadiisa dib ugu noqdeen dhulkoodii 2000 sano ka dib?
Dejiya iyada. Horumariye. Koox waraaqo ah ayaa lagu dhex sameeyay. Maxaa kale oo tusaale ah ayaa jira?
Haddaba nebiyadu miyaanay taas ku doonayn riyadoodii?
Ka dib oo dhan, haddii 80 sano ka hor ay u sheegi lahaayeen Mordechai oo ka yimid Morocco iyo Libish oo Poland ka yimid inay yihiin. Wiilashooda iyo wiilashooduba waxay wada joogi doonaan dalka reer binu Israa'iil oo ay talada reer binu Israa'iil wada dhistaan. Miyay odhan lahaayeen waa sidii musqul oo kale?
Markii aan is-barbardhigay Dawladda Israa'iil adeegyada, ulama jeedin inaan idhaahdo dawladnimadu waa wax aan qiimo lahayn ama waa karaahiyo sida adeegyada. Waxa aan uga jeeday in aan idhaahdo Dawladnimadu waa inoo macno (muhiim) inoo ah, wax kalena maaha. Aad ayaan ugu faraxsanahay in tani ay ka dhigan tahay in aan gacanta ku hayno, oo runtii sannado badan ma dhicin, haddana uma arko inay tahay qiimo diimeed. Waa ugu badnaan qiimo qaran. Runtii imaatinka Masiixu waa ballan sida roobka oo kale. Maalmihii Masiixa sidoo kale ma laha qiimo diimeed maadaama aysan jirin dhawritaanka mitzvos, laakiin ugu badnaan macnaheedu waa noo ogolaanaya inaan ilaalino mitzvos badan (macbadka, iwm.). Taajirnimada sidoo kale waa hab lagu dhawro awaamiirta, mana ka dhigayso maal qiimo diineed. Dawladnimadu asal ahaan waa macne, in ay muddo dheer inaga maqnayd oo aynu rabnay oo aynu la rafaadnay la’aanteed aad ayay innagu jahawareertay (sida nin faqiir ah oo lacag qiimo u arka dhibtiisa awgeed) .
Dhanka mucjisooyinka waxaa jira jahawareer aad u faa'iido badan. Faragelin kasta oo Eebbe adduunka ku sameeyo waa mucjiso. Faragelintu waxay ka dhigan tahay in wax la rabay inay dhacaan iyada oo aan la faragelin (sida waafaqsan shuruucda dabeecadda) oo Ilaah baa soo dhexgalay oo wax kale ayaa dhacay. Tani waxay ka dhigan tahay ku xad-gudbi sharciyada dabiiciga ah. Taasi waa, mucjiso. Ma jiro faragelin rabaani ah oo dabiicadda ah oo aan ahayn mucjiso.
Soo noqoshadayada Israa'iil ee aan ku soo noqonayno midda goonida ah aad ayay ii garanaysaa waana ku raacsanahay. Taas macnaheedu ma waxaa meeshan mucjiso ka dhacday? Shaki weyn ayaa indhahayga ku jira. Tani waa dhacdo taariikhi ah oo aan caadi ahayn.
Maan fahmin farqiga u dhexeeya. Illahay wuxuu sheegay inuu soo diri doono nebi ama uu da'ayo. Waxaan samaynay mitzvot, goormaad go'aansan doontaa inaadan roobin? Todobaad kadib? bil? Qarni? Sideed u go'aansan doontaa inaad samayso mitzvot iyo in kale? Immisa qaynuun ayaa habboon in la sameeyo? Dadka qaar? Wax kasta oo halkan ah run ahaantii maaha kuwo la beenin karo. Waa su'aal badan oo ku saabsan aragtida guud ee maaha mid beenin ah. Sida aan u qoray, gabagabadayda in Ilaah uusan soo faragelin ma aha natiijada beenin aan leexleexad lahayn ee waa aragti.
Hadda waan fahmay waxa aad ula jeedo “Diinta” sidaa awgeed waxaan fahmaaya erey bixinta Dawladda Israa’iil oo asaaskeeduna aanu macno diineed lahayn, ereyga “diin” waxaan u arkaa macne ballaadhan oo sidaas darteed indhaha Kibbutz Galuyot iwm. macne diineed oo weyn ayuu leeyahay.
Haata’u malee, namoota adda addaa adda baasuun barbaachisaadha jedhameera.
Sida mucjisooyinka, waxaan la wadaagaa ra'yiga ah "berrito qorraxdu way soo bixi doontaa" - tani maaha mucjiso. Xaqiijinta sharciyada dabeecadda maaha mucjiso.
Waxaan si buuxda ula wadaagaa mowqifka in wax walba aysan ahayn mucjiso, sida dadka qaarkiis ay jecel yihiin inay sheegaan.
Laakin in la ururiyo masaafurinta iyo ku noqoshada Israa'iil laba kun oo sano ka dib, waa arrin aan la mid ahayn dadyowga kale, ma aha dhacdo dabiici ah.
Waa run in aysan jirin wax ka gudba badda ama "qorraxda Givon Dom" halkan, laakiin waxaa jira dhacdo halkan aan dabiici ahayn, gaar ah nooca iyo nooca. Sida muuqata xitaa qodobkan kuma heshiin.
Laba doodood baa loo baahan yahay in la kala saaro: 1. Dhismihii dawladnimo iyo ururinta qurbaha oo mucjiso ahaa. 2. Labadaas waxay leeyihiin macno diineed. Ma jiro wax ku tiirsan labada jiho. Waxaa dhici karta mucjiso aan macno diineed lahayn (sida in la furo godad dadka u maleeya in ay tahay mucjiso), dabcan waxaa jiri karta macne diineed mana aha mucjiso. Waxaan ku doodayaa in aanay jirin wax calaamad ah oo muujinaya in tani ay tahay mucjiso (anomalies ma aha mucjiso), mana jirto wax diin ah oo muhiim ah (waxaan ahay Sionist cilmaani ah). Sida la sheegay, waxaa suurtagal ah in la isku khilaafo mid ka mid ah labadan sheegasho si gaar ah ama labadaba si wadajir ah.
Waxaa intaa dheer, waa suurtogal in dalkani uu noqdo kobaca furashadayada (inshallah), waxaana laga dhisi doonaa macbad iyo madax furasho iyada oo loo marayo. Haddana wax macno diineed ah oo indhaheyga ah kuma laha. Waa madal cilmaani ah oo loo sameeyay ujeeddooyin cilmaani ah iyo dhiirigelin cilmaani ah. Falalka caynkaas ah ma laha macno diineed.
Taasi waa, macnaha diineed, sida aad u aragto, waxay u baahan tahay ujeedo diineed?
Ficilka aadamuhu wuxuu leeyahay muhiimad diimeed kaliya haddii lagu sameeyo ujeedo diimeed (A.A. Leibowitz). Inkasta oo mitzvos uusan u baahnayn ujeedo laakiin waxay ku jirtaa kaliya mitzvos (sababtoo ah sabra macnaha guud sida magac random). Iyo gaar ahaan in aan caddeeyey in maqaalka ( duhurkii, cilmaani fashilantay ee xadgudubka) in dhammaan ra'yiga amarradu waxay u baahan yihiin iimaan. Qalajinta dhoobada aan loo samayn jannada dartiis iyo mitzvah aawadood (dejinta reer binu Israa'iil) maaha qiimo diimeed. Waxay leedahay qiime qaran.
Tani waa dabcan kaliya xaalad lagama maarmaan ah laakiin kuma filna. Falka laftiisa waa inuu lahaadaa qiimo diimeed, Tawreed oo keliya ayaana qeexaya. Qofka hal lug ku istaaga arrin diineed oo qalbi-jabsan wax qiimo ah oo diineed kuma laha.
Maimonides in Mo'an in Pentateuch waxay kala saartaa qofka wax ku sameeya "lubnihiisa" iyo qofka ku sameeya ulajeeddo iyo ujeeddo.
Way caddahay waxa heerka sare yahay.
Su'aashu waxay tahay ma ku qeexi karnaa diin la'aan fal kasta oo qofku sameeyo isagoon ula kac ahayn? Waan ogolahay mabda' ahaan laakiin tani waa daraasad ku khasab ah qaar badan oo reer binu Israa'iil ah, weli waxaa jira qaar u fududeeya oo qiimeeya shaqada "ma aha aawadood"…
Maqaalkayga ku saabsan mandiilka Oakham waxaan ku sharxay in aan rumaysad la'aanteed aysan u samaynayn aawadiis. Ma aha dhaqan diineed haba yaraatee. Eeg Rambam Sufach oo ka socda Boqorrada. Kii rumaysta oo aan ula kac ahayn, halkan waa inuu kala qaybiyaa mitzvos iyo waxa aan lagu qeexin mitzvah. Barashada saxda ah waa shay qurux badan, laakiin maaha qalab lagu caddeeyo runta. Oo wuxuu ku arkay tafsiirayaasha (Rambam iyo Rabbeinu Yonah iyo kuwa kale) oo ku saabsan Mishnah ee Avot (Hoy Dan qofka dhan midigta) in ay ku qoreen in ay ka hadlaan kaliya halkan in ay macquul tahay, liddi ku ah ra'yiga caanka ah. Oo waxaan kaga qoray maqaalladayda BDD ee mandiilka Oakham.
Haddii rabigu caddeeyo waxa uu ula jeedo isagoo leh "qiimaha diinta." Taasi waa, waa qiyam diimeed oo kaliya ilaalinta mitzvah lafteeda (Qeexitaan uu cafiyay rabbi sababtoo ah waxaan fahamsanahay inuusan jeclayn, Leibowitzian), ma wax kasta oo ka caawiya ilaalinta mitzvah ee lagu sameeyay diinta baraarujin, iyo wixii ka baxsan: Ma qiimo diini ah haddaanu jirin.
Waad ku mahadsan tahay, oo ka xumahay haddii aan dib ugu soo celiyo rabbaaniga doodihii hore ee la ilaaway ee qalbiga ka yimid.
Nabadda weyn: qiimaha diintu waxay ka dhigan tahay qiimaha shaqada Eebbe. Qiimaha diintu maaha amar oo keliya mar haddii cibaadada Eebbe ka weyn tahay sharciga. Xitaa ka hor Shulchan Aruch, waxay leedahay qiimo diimeed. Runtii, shardiga ayaa sidoo kale loo baahan yahay in loo sameeyo shaqada Eebbe dartiis.
Sida ugu fiican ee aan go'aan ka gaaro dawladu ma laha qiimo diini ah si kastaba ha ahaatee. Dawladdu waa aniga / baahidayada ee maaha qiimo. Waxaan rabaa inaan ku dhex noolaado dadkayga iyo dhulka Israa'iil oo ah balwaddayada taariikhiga ah. waa taas.
Marka laga hadlayo dawlad ay maamulaan Xalaqadu waa in laga tashadaa qiimaha ay leedahay (maadaama dawladu aanay marnaba ahayn qalab ay muwaadiniintu u adeegsato), laakiin dawlad innaga oo kale ah ma laha qiimo diini ah.
Dhanka NFM, ma garanayo NFM aad raadineyso (marka laga reebo quduusnimada dumarka). Waa laba shay oo kala duwan: waa baahi waana qiimo. Maxaa dhacaya haddii shay qurux badan yahay ama wanaagsan yahay? Kuwani waa laba shay oo kala duwan.
Waxaan uga jeeday in aan idhaahdo, waa maxay macnaha qiimaha diineed ee ka baxsan qeexida aad dhigatay? Maxaa loo malaynayaa inuu yahay farqiga u dhexeeya mitzvah, ama qiimaha diinta, maxaase iga caawiya jiritaankiisa? Mise maan fahmin ereyada rabbaaniga oo tani sidoo kale waa su'aal madhalays ah, mar haddii fikraddani aysan lahayn macne dhaafsiisan qeexitaankeeda? Waxaan filayaa inay suurtogal tahay in la qeexo farqiga u dhexeeya wanaagga iyo quruxda, xitaa haddaan ahayn hadal, iyo NPM dhexdooda. (Tusaale ahaan: Uma malaynayo inaan heli doono qof naftiisa u bixiya quruxda, halka ay wanaagsan tahay, sababtoo ah quruxda ma laha macno ku filan oo muhiim ah, ugu yaraan fikradayda).
post Scriptum. Waxaad u aragtaa gobolka (sida aan u fahmay) inay tahay shay qiimo qaran leh, oo ma aha inaad ka caawiso xataa inaad ilaaliso mitzvos. (Inkasta oo aad tiraahdo waxa caawiya in la dhawro amarada looma tixgeliyo qiimo diimeed.) Marka loo eego habkaaga, maxaad runtii u odhan Hillel? Kicinta qirashada ku saabsan abuurista adduunka waxay noqon kartaa xitaa haddii aan helo mushahar kordhin ama buug kale oo Harry Potter ah ayaa soo baxay, laakiin qof caadi ah ma odhan karo ammaan. Haddii dawladu runtii leedahay qiimo qaran oo kaliya, oo aan lahayn bilawga nidaamka cibaadada Ilaah, markaa anigu booskaaga uma tixgelin doono kicin wanaagsan oo lagu ammaano. Raabbigu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu sharaxo waxa uu u malaynayo iyo xagee xuduudu ka gudubtaa?
Mahadsanid, waan ka xumahay oo sannad cusub oo farxad leh.
Way igu adag tahay inaan dood ka yeesho muddooyinkan oo kale.
Ma jiro wax qiimo diini ah oo imanaya xilligii mitzvah. Taa lidkeeda, mitzvah waa tusaale shay qiimo diimeed leh. Laakiin xitaa ku dhaqanka akhlaaqda waxaa jira qiimo iyo muhiimad diimeed (goraysi sababtoo ah waa fulinta doonista Eebbe). Taas beddelkeeda, buuxinta baahida jahliga ma laha qiimo damiir iyo mid diineed. Qofku wadan buu rabaa siduu rabo quraac ama guri. Waa buuxinta baahi ee maaha qiime. Marka baahida muhiimka ah ee noloshaada la buuxiyo (sida badbaadinta noloshaada) tani waa sabab weyn oo aad u leedahay ammaan. Ma arko waxa aan halkan laga fahmin iyo waxa u baahan in la sharaxo.
Dawladdu ma ogola in la dhawro qiyamka diinta? malaha haa. Laakiin quraacda iyo mushaharka ayaa sidoo kale oggol.
29 Elul 09 - 2016/15/03 saacada XNUMX:XNUMX
Anigoo ka duulaya doodahaas sare waxaan jeclaystay in aan weydiiyo dhawr su’aalood oo la i waydiiyo ra’yigayga aan ka leeyahay maqaalka iyo doodaha ku soo wareegay.
A. Inta aan fahansanahay, Sarreeye ma rumaysna wax-is-siinta macnaha faragelinta Abuuraha iyo abuurista "mucjisooyinka" sida Dawladda Israa'iil, ururinta maxaabiista, iwm, gaar ahaan "mucjisooyin" yaryar oo "dhaco" qof sida "lacag" meel lama filaan ah uga soo dhacay.
Waxaan waydiiyay, [sida ku cad mawduuc aad u janjeerto inaad wax badan soo bandhigto], oo ku saabsan horumarka waxaad qortay in cawaaniyiintu ay eegaan horumarka sharciga dhexdiisa markaad dhinac istaagto oo aad eegto sharciyada ka baxsan oo aad waydiiso 'yaa abuuray sharciyadan', iyo markaad aragto sharcigaas. waxaa loo dhisay habkan waxay keenaysaa abuurista, waxaad ku soo gabagabeyneysaa in Ilaah u abuuray sharciga habkan, taas oo ah, in Ilaah abuuray 'sharciga korriinka'. Haddii ay sidaas tahay, xitaa marka la eego mucjisooyinka, waa run in 'sare' iyo aragtida fudud ay noogu muuqato in wax walba ay yihiin kuwo dabiici ah, iyo koorsada dadka reer binu Israa'iil ee qarniyo badan ayaa leh sharraxaad dabiici ah, sida aasaasida State of Israa'iil, laakiin haddii aan eegno dibadda iyo weydiiyo Similar in wixii nebiyada iyo Tawreed wax sii sheegeen, laga yaabaa in aan odhan karno in Abuuraha qorsheeyay oo hanuuniyey this geeddi-socodka 'dabiiciga ah' oo dhan ujeedo, iyo fiirin ka baxsan habka iyo sharciyada dabiiciga ah gudahood. waxay ku siin kartaa sawir bixinta? [Xitaa marka la eego mucjisooyinka yaryar, xagashan aragtida waa la qaadan karaa].
B. Su'aal kale, tani ma waxay ka dhigan tahay inaadan rumaysnayn mucjisooyinka lagu qoray Tawreed iyo Nabiga, oo waxaa loo arkaa aragti sare oo ah inay beeninayaan shuruucdii Fiisigiska sida: Usha Abeesada noqota, Rooti samada ka soo degay. ,Biyo dhiig isu beddela,iyo gaadhifaras wata fardo duufaanka wata,iyo wadaaddo badan.
saddexaad. Intaa waxa dheer, maxay tani ka odhanaysaa aaminsanaantaada inaad Ilaah ka ogtahay falalka bani'aadamka, waxay u muuqataa in kormeer la'aantu aysan diidin ogaanshaha Ilaah, laakiin waxay u muuqataa in si qoto dheer ay jiraan saameynaha caqiidadaas midba midka kale ah, iwm. fikradda ah 'abaalmarinta iyo ciqaabta' habkaaga ma jiraan, sidaas darteed erayadaadu waxay ka dhigan yihiin in 'adduunka soo socda' uu yahay caqiido xikmad ah oo aan wax taageero ah ku lahayn Tawreed [Waa hubaal waan oggolahay, laakiin nebiyada iyo Qorniinku waxay leeyihiin wax badan Taageero cad], rumaysnaan la'aanta mabda'an, waa in lagu celiyo erayada Leibowitz, In dhammaan 'eedaynta' mitzvah ay tahay sababtoo ah waxaan sameeyay inaan sidaas sameeyo, taas macnaheedu maaha adiga? Hadday sidaas tahay waxaan rajaynayaa inay kuu caddahay in qaar badani aanay ka waaban doonin inay diintan ku biiraan, maxaa naftayda u gelinayaa nidaam sharci oo duugoobay oo duugoobay. Aqbal qayb kaliya oo ka mid ah nidaamkaas sharciga, adiga oo keliya, maxaa ka khaldan sharciyada Dawladda Israa'iil?
D. Waxa aad ka dhawaajisay waxa aad sheegtay in aad aaminsantahay fikradda ah 'Tawreed jannada ka yimid' [gudahood xad tan iyo markii aan fahmay in aad aqbasho qaar ka mid ah sheegashooyinka dhaleecaynta Kitaabka Quduuska ah], haddii kale waa in aad rumaysataa fikradda 'sheegid'. Oo waxaan waydiiyay, maxaad halkan sidoo kale u isticmaali doonin isla caqli-gal la mid ah [waxay sidoo kale macno u leedahay ra'yigeyga inaan dhaho], in wax kasta oo aanan arkin ma haysto sabab aan u qaato inay jiraan, ie ku dhawaad ​​2500 oo sano qofna ma arag wax sii sheegidda waxa ay tahay iyo sida ay tahay in ay u muujiso, oo aad aaminsan tahay iyada oo ku saleysan waxsii sheegyada aan khatarta ahayn ee mar jiray [wax sii sheegiddii hore waxay u dhigantaa koorsadan: wanaag samee wanaag, xumaan samee, xumaan, dhammaan geeddi-socodka dambe ee yimid ayaa sameeya. oo aan laga leexan dariiqa dabiciga ah], haddaba maxaa diidaya in aan si fudud ugu qaadan in aanay jirin wax sii sheegidda oo ay tahay mala-awaal ay dadku ku dhaqmi jireen adduunyadii hore iyo sida aanay maanta u jirin ma jirin waayadii hore, sida aynu nahayna. mar la qiyaaso waxaa jira jinni iyo jinni iyo sixir iyo calamadaha zodiac iyo halyeeyo kale oo qurux badan, qiyaasi waxaa jira wax sii sheegid, asal ahaan waxaan sheeganayaa sheegashadaada erayadaada, ma haysto sabab aan u rumaysto wax sii sheegidda haddii a. Ma arko inay jirto maanta. B. Waxaan u sharxi karaa dhammaan waxsii sheegyada dabeecad ahaan. saddexaad. Waxaan haystaa sal maangal ah oo aan ku rumaysnahay in beri hore aanay dadku si wanaagsan u kala soocnayn oo ay alifeen inay wax sii sheegaan ama ay mala awaal yihiin.
A. Marka hore, ma garanayo waxa sharafteyda ay aaminsan tahay ama aysan rumeysan, waxaan ka dhowahay waxaan aaminsanahay (ama aanan rumaysan). Sida aan aaminsanahay, runtii ma hayo wax calaamad ah oo muujinaya in wax mucjiso ah ay ka dhacayaan adduunkeena. Waxaa laga yaabaa inay jiraan qaar laakiin ma arki karo iyaga. Tani maaha mid la mid ah doodahayga ku saabsan korriinka mar haddii ay jirto dood ku qasbaysa jiritaanka gacan toosan (abuure), halka halkan ay tahay oo keliya suurtagal.
Marka laga soo tago, mucjiso ayaa lagu qeexaa faragelinta Eebbe ee adduunka, taas oo ah, isbeddel ku yimid qaabkii caadiga ahaa. Hoy waxa uu sheegay in tallaabada sharcigu dhigayo ay ahayd X oo uu Alle u beddelay Y. Ilaa iyo inta aan leeyahay sharraxaad dabiici ah oo ku saabsan waxa dhacaya, ma arko sababta aan u malaynayo inay jirto faragelin. Oo haddii ay tahay qof abuura dhaqanka dabiiciga ah, markaa anigu taas ayaan ka hadlayaa. Tani waa abuurista sharciyada.
B. Buugaagteyda waxaan ku faahfaahin doonaa tixraacayga ku saabsan sharraxaadaha dabiiciga ah ee ilaha kala duwan. Guud ahaan, waa suurtogal in waagii hore uu Ilaahay wax badan soo dhexgalay (ka dibna waxaa jiray mucjisooyin iyo wax sii sheegid). Maanta ma arko wax calaamado ah oo ku lug leh ku lug lahaanshiyaha Ilaah.
saddexaad. Maan fahmin halkan. Ka warran ka-qaybgal la'aanta kormeer la'aanta? Waxaa jira kormeer aan toos ahayn oo lagu sameeyo ficillada aadanaha laakiin wax faragelin ah ma jirto (ugu yaraan marar badan).
Ballanqaadka Tawreed iyo Mitzvah kuma jiraan abaal-marin iyo ciqaab, laakiin waa waajibka ah in la sameeyo waxa Eebbe amray. Maimonides wuxuu hore ugu qoray faallooyinkiisa rajada shaqaalaha ee abaal-marinta iyo cabsida ciqaabta. Malaha tani waa sababta caqiidooyinkan ku saabsan UAV loo abuuray. Waxaana laga yaabaa inay dhab yihiin, laakiin anigu garan maayo.
Su'aasha qiimeynta, cidda ku biiri doonta iyo cidda aan ku biiri doonin, kuma xirna arrinta runta. Su'aashu waxay tahay in aan sax ahay oo ma aha in aan caan noqon doono. Waxaan ka soo horjeedaa beenta quduuska ah (in aan been sheego si dad badan loogu xiro shaqada Ilaah). Haddii kaliya ay sabab u tahay masaalka maroodiga Maimonides. Kuwa shaqada ku biiraya waxay ku socdaan baadil, markaas waxay u shaqaynayaan Ilaah baadi ah, ku biiristooduna wax qiimo ah ma leh.
Waa maxay xidhiidhka ka dhexeeya sharciyada Dawladda Israa'iil? Iyo in kii ilaaliya uu ka baxo waajibkiisa diineed? Maxaad uga hadli weyday sharciyada FIFA (Ururka Kubadda Cagta)?
D. Middaani sidoo kale waxaa lagu sharxi doonaa buuggayga. Qaar ka mid ah kuwan ayaa sidoo kale looga hadlay buugaag run ah oo aan xasilloonayn (oo ku saabsan doodda markhaatiga ee maalinta). Halkan waxaan ku sharxi doonaa si kooban. Inkasta oo sharciyada dabiiciga ah loo maamulo si isku mid ah mar kasta, laakiin bini'aadamku way isbedelaan. Iyo in wixii ay markii hore ku fikirayeen ay maanta u malaynayaan? Maxayse mar sameeyeen maanta? Maxay mar xidhan jireen maanta? Haddaba maxaad u malaynaysaa in akhlaaqda Eebbe aanay waxba iska beddelin? Haddii aan go'aansado waxaan jeclaan lahaa in aan barbar dhigo bini'aadamka ee ma aha in aan la barbardhigo dabeecadda aan noolayn. Ma jirto sabab loogu maleeyo inuu u dhaqmi doono isla mar kasta. Markaa haddii uu go'aansaday inuu si tartiib tartiib ah uga tago adduunka, uma arko wax yaab leh ama aan la fahmi karin. Taa lidkeeda, xitaa waxaan hayaa mala awaal ah sababta ay tani u dhacayso. Sida ilmo markii uu weynaado aabbihii ka sii daayo keligiis oo keligiis u orda. Sidaas oo kale ayaa ah hab-dhaqanka Eebbe innaga. Tagitaankiisu maaha hoos-u-dhac ku yimaadda jiilasha sida aynu la wada soconno, balse waa sara u kaca ( bisaylka ) ee qarniyada. Maanta waxaynu horeba u fahmi karnaa in uu jiro hogaamiye caasimaddu xataa mucjisooyin la'aan. Waxaan leenahay xirfad falsafadeed oo ku filan si aan u fahamno in adduunka lagu xukumo sharciyo go'an ay uga marag kacayso abuuraha in ka badan adduunyo xamaasad leh. Haddaba hadda uma baahnid mucjisooyin. Ugu yaraan haddaynu u dhaqmi lahayn oo u fakareyno sida dadka waaweyn, sida la inaga filayo. Runtii waxaa jira kuwa kale oo leh feker caruureed, laakiin iyaga laga filayo inay koraan.
Ka dib jawaabtaas, waxaad tidhi "waxaa hubaal ah in waagii hore eebbe soo dhexgalay wax badan." Waxaase Tawreed ku sugan Aayado ka hadlaya in la dhexgalo qarniyaal (Dhulkiinna roob baan siiyey xilligeeda, roobkiinnana wakhtigeeda ayaan siiyey, iwm). Sidee loo odhan karaa Ilaahay (oo sida muuqata ogaa inuu mar uun xidhiidhka ka jari doono) wuxuu qoray ballamo “abaal-marin” ah oo uu mar uun damcay inuu joojiyo fulinta? Midda kale, haddii uu waalidku u ballan qaado ubadkiisa nacnac uu ugu beddelo hab-dhaqan wanaagsan, xitaa haddii ubadku weynaado, waalidka waxaa laga rabaa inuu ballankiisa oofiyo, sax? Haddii uu rabo inuu joojiyo galmada, ugu yaraan waa inuu sharaxaa sababta (waxaan ku soo koray, iwm.).
Tawreed waxa ay sidoo kale ku saabsan tahay nebiyada, waxsii sheegyada iyo mucjisooyinka, iyo sidoo kale waa la waayay. Macbudkii iyo allabaryadii sidoo kale waa la waayay. Addoonsiguna waa sidaas oo kale. Waxaan ogaanay in mararka qaar Tawreed ay la hadasho dadkii waagii la bixin jiray Tawreed, waxaana jira isbedelo aysan Tawreed ka hadlin. Waa la qiyaasi karaa sababta, laakiin kuwani waa xaqiiqooyinka.
Xagga nebiyada, waxsii sheegyada, mucjisooyinka, macbudka, allabaryada, addoonsiga, iwm, kuwaas oo ah waxyaalo aan ballan lahayn oo sii jiri doona qarniyo badan. Waxa jira tusaalooyin keliya oo ay mar uun dhaceen, laakiin maxaynu ka filaynaa inay iyaguna mustaqbalka noqdaan? Laakiin xagga abaal-marinta iyo ciqaabta, Gd waxa uu si cad ugu qoray kitaabka Tawreed in ay jiraan xidhiidh ka dhexeeya jiilalka ka dhexeeya dhawrista mitzvos iyo qaar ka mid ah abaal-marin, sidaas darteed waxaan haystaa sabab wanaagsan oo aan filayo in xidhiidhkan uu jiri doono mustaqbalka, iyo haddii aan ku soo gabagabeyno in uu jiro. ma jiraan waa su'aal adag oo ku saabsan runta Tawreed, ma aha sidaas? Sharaxa kaliya ee aan u malayn karo su'aashan waa weedho ay ka mid yihiin: " Abaalmarinta Mitzvah ee jasiiradda Alma Likha" ka dibna waa inaan xididdada u siibinaa kuwa fudud ee aayadaha sida "Oo waxaan ku siiyey roobkiinna xilli ku habboon" iyo dhigay. iyaga oo tusaale u ah mushaharka adduunka dambe. Laakiin weli way adag tahay, sababtoo ah ma jiro Kitaabka Quduuska ah oo aad u fudud.
Ma aanan fahmin. Arrinta wax sii sheegiddu waxay ku lug leedahay amarro dhowr ah. Mitzvos miyaanay ahayn qarniyo badan? Qayb ka mid ah shaqada Ilaahay waa dhegeysiga nabiga iyo hoggaankiisa ruuxiga ah ee anaga. Tani ma aha xaalad qaar ka mid ah oo aan ku yeelannay nebi. Tani waa tii Tawreed ballan qaaday oo xitaa ku amartay inuu isku dayo oo maqlo codkiisa. Nabiga sidoo kale waa qayb ka mid ah habka loo galo dagaalka.
Ballanqaadyada ah in haddii aan amarrada dhawrno in nala siin doono roob , waxaa lagu fasiraa inay yihiin ballanqaadyo ka hadlaya xilliga roobku ku xiran yahay Eebbe. Marka ay ku xiran tahay isaga markaas ayaa la siin doonaa ka dib ilaalinta. Hadda waxa uu go’aansaday in uu na siiyo maadaama aanu waynay, waxaana muuqata in wixii hadda ka dambeeya aanay waxba ka jirin. Si fudud ayuu inoogu sharxayaa siyaasaddiisa: markaan wax siiyo waa ilaalinta amarrada.
Xagga nebigana, waxa ku qoran kitaabka Sharciga Kunoqoshadiisa: "Waayo, nebi baa dhexdiinna ka kacaya", halkan ma jiro ballan soo celin ah. Yacni, dhammaan awaamiirta la xidhiidha baaritaanka nebiga waa awaamiir jirta - haddii nebi la dhisayo, sidaas oo kale ha ahaato. Sida haddii aad xidhato maro afar baal leh, waa inaad maro saartaa. Mitzvah waligiis ma taagnaado, laakiin had iyo jeer ma noqon doonto mid la hirgasho. Laakiin waxa gaar ah oo ku saabsan aayadaha ka hadlaya abaalgudka iyo ciqaabta waa inay leeyihiin xidhiidh haddii aan samayno A. - markaas Ilaah wuxuu samayn doonaa B. Xiriirka laftiisa kuma xirna xaalad kasta. Waxaad mooddaa in xidhiidhku mar walba jiro. Markaynu nimaadno in xidhiidhkani aanu jirin, waxaad mooddaa inuu halkan ka hor imanayo Tawreedka. Waxaad ku doodi kartaa in sheegasho kasta oo ka jirta Tawreed aanay daruuri ahayn run qarniyo badan. Laakiin markaas waxaa lagu qasbay inuu sheego in amarrada laftooda ay sidoo kale isbeddeli karaan.
Waa maxay sababta aan loo odhan oo kaliya in iyada oo xidhiidhka this aan la arki karin xaqiiqada, laakiin waxa uu jira hab qarsoon (qarin wejiga)?
Waxaad keentay aayadaha ka hadlaya nebi been abuur ah. Dhammaanba, aayadaha ka hadlaya nebiga (Sharciga Kunoqoshadiisa):
Af-hayeenka Mkrbc Mahic Cmni Ikim Adiga Adiga Ikok Godkaada Tsmaon: Ccl Asr Salt Mam Ikok Ilaahaaga Bhrb ee Hkhl ka tagaya, isagoo leh ma Asf Lsma At Cole Ikok Alhi iyo At Brigade Hgdlh Hzat ma Arah One more, iyo La Amot: oo yidhi Ikok ilaahadda Hitibo Asr Dbro: af hayeenka Akim Lhm Mkrb Ahihm Iyo Malaha Neuvena: Iyo Jasiiradaha Guud, Illahay waxba kama qaban doono weriyaha: " Jasiiradda Shavua Jacka
Jid ahaan, qeexida saxda ah maaha mitzvah jira ee waa mitzvah shuruudaysan (sida tassel). Ku dhawaad ​​mitzvah kasta oo togan waa shuruud. Mitzvah jira waa mitzvah aan la baabi'in karin laakiin kaliya la hayo. Mitzvot-kan waa la burin karaa (haddii ay xaaladdu jirto - xidho maro iyo baalal, hana samayn mitzvah).
Su'aasha u dambaysa, dabcan waxaa la odhan karaa Ilaah si joogto ah ayuu u soo dhexgalaa, laakiin markaan baadhno wuxuu ku degdegaa godka inuu nagu wareeriyo. Taasi waxay ila tahay wax aan macquul ahayn. Mar kasta oo aan eego waxa ka dhacaya adduunka arrimuhu waxay leeyihiin sharraxaad dabiici ah oo caadi ah. Shuruucda dabiicadda ayaa shaqeeya, oo markaad ku tijaabiso shaybaadhka, waxa dhacaya ayaa la filayaa inay dhacaan. Ma jirto sabab loo maleeyo inay halkan ka jirto ciyaar qariib ah oo la yaab leh. Tani caddayn maaha ee waa tixgelin caqli-gal ah. Markaan arko jidh guuraya, malahayga waa in xoog lagu dhaqay ee ma aha in Eebbe go'aansaday inuu xoog la'aan ku raro. Waxaa intaa dheer, waxaan sidoo kale u maleynayaa inay jiraan jirro u dhaqdhaqaaqa awood la'aan. Tani waa fikradda sayniska ee la aqbalay waxayna u egtahay mid macquul ah oo aniga ii shaqaynaysa.
Sidoo kale aayadahani ma tilmaamayaan goorta nebiga la soo taagayo iyo inta jeer. Guud ahaan, sheegashada nooca: Ilaah wuxuu ka dhigi doonaa X ma aha sheegasho la beenin karo (maxaa yeelay waqti cayiman oo sheegashada lama cayimin). Laakin sheegashada nooca: Haddii X uu dhaco markaas Ilaah ayaa ka dhigi doona Y labadaba waa kuwo la beenin karo marka loo eego in X uu dhaco iyo Y uu yahay mid la qiyaasi karo. Markaa waxaa jira saddex ikhtiyaar oo lagu xallin karo doodda labaad. Ama in la yiraahdo X runtii ma dhicin. Ama dheh Y ma aha mid la cabbiri karo. Ama in la yiraahdo sheegashada waa la diiday. Laakiin haddii la beeniyo, ma aha su'aal fudud oo ku saabsan saxnaanta sheegashada Tawreedka guud ahaan.
Ma jiro wax halkan lagu diidi karo macnaha sayniska. Immisa qaynuun waa in la sameeyaa si uu roobku u di'o? Immisa qof ayaa la gudboon inay amarradan sameeyaan? Intee in le'eg ayaa roob da'i doona, iyo intee in le'eg ayaa la filayaa? Tani waxay ku saabsan tahay sida arrintii Nabiga loo beenin karo.
Sida aan u qoray, aragtidayda ah in Ilaah uusan soo dhexgelin ma aha natiijada beenin cilmiyeed, laakiin aragti guud (uma muuqato in uu faragelinayo). Xaqiiqdu waxay tahay in xaaladda aan ku jirno, waxaan ku andacoonayaa in uusan Eebbe soo faragelin oo in badan oo mu’miniinta ah ay sidaas qabaan. Waxay u maleynayaan in marka la samaynayo mitzvos ay da'aan oo waxaan u maleynayaa inaysan jirin wax xiriir ah. Indhahaagu waxay arkayaan in xaaladda dhabta ahi aanay xaqiiqdii ahayn xaqiijin ama beenin wax halkan ah.
Waxaan fahamsanahay in aysan cilmi ahaan dib-u-celin karin, laakiin xitaa ra'yi guud ayaa igu filan inaan noqdo mid la celin karo (ma ahan macnaha macquul-xisaabta ee ereyga).
Farqiga u dhexeeya arrinta nabiga iyo arrinta roobka waa in xidhiidhka ka dhexeeya amarrada iyo abaalgudka (caqli ahaan) uu ahaado mid degdeg ah. Taasi waa, haddii reer binu Israa'iil ay u dhaqmaan si waafaqsan amarrada, jawaabta Ilaah waxay macno samaynaysaa in ay ku iman doonaan muddo macquul ah gudahood (dhar dhawr bilood gudahood oo aan ka dib 700 sano). Laakin arinta nabiga ma jirto wax ka mamnuuc ah in Alle soo diro hal nebi 3000 oo sano gudahood. Ma jiro "muddad macquul ah" halkan oo la malayn karo.
Waxa aan isku dayayaa in aan fahmo waa sida aad u soo koobto iska hor imaadka u dhexeeya aragtidaada iyo farriinta cad ee ka soo baxday aayadaha. Waxaad hore u qortay jawaab sidan oo kale ah: "Wuxuu si fudud noogu sharxayaa siyaasaddiisa: markaan wax siiyo waxay u tahay ilaalinta mitzvos." Waan aqbali karaa sharaxaaddaas. Laakiin xitaa sida aad u aragto way adag tahay in la sheego siyaasaddan haddii uu fulin waayo?
Wuu fulinayaa. Aduunyada marka uu wax siiyo waxay ku socotaa amar. Beryahan ma bixiyo, waagii hore wuu bixin jiray. Beryahan dambe nabiyo uma soo diro oo uu soo diray. Taasi waa siyaasad is beddeshay (ma aha xidhiidhka ka dhexeeya wax bixinta iyo salaadda ee waa wax-siinta nafteeda).
Intaa waxaa dheer, sida aan kuu soo qoray Fook Hezi in xaaladda taagan ay ka dhalatay muran ku saabsan in uu soo faragelinayo iyo in kale. Markaa qofna ma sheegan karo in xaqiiqda lafteedu ay muujinayso faragelinta, xitaa sababo la yaab leh iyo caqli-galnimo. Markaa aniga aniga oo aan eegin waxaad waydiin kartaa ujeedada hadalkan. Malaha hadal guud oo aan ahayn in si dhab ah loo baaro, waxayna muujinaysaa muhiimada mitzvos-ka. Muhiimadda mitzvos-ka ayaa weli jirta maanta. Xaqiiqadu way isbedelaan laakiin casharku waa daa'im.
29 Elul 09 - 2016/15/04 saacada XNUMX:XNUMX
Aamiin Yaa Rabb Rabbii Mikaa'iil,
Aan ku bilowno Mister Tsitsro, markaa macnaha Derech Eretz Kedma ee Tawreed maaha mid cusub oo haddaysan ahayn macnaha waxaa jira uun nooc ka mid ah fallaagada halkan [Waxaan leeyahay shakhsiyad ka sokow addoonsiga Gd]
Maxaa yeelay, maxaa muhiim ah haddii xeerarku ay xalaal yihiin ama ay siyaasad yihiin marka laga reebo dareenka ah in xeerarkii siyaasaddu ay ka soo jeedaan shuruucdii [aadmiga] ee iftiimay iyo xeerarkii xalaashadu ay yihiin uun wax laga xumaado oo laga xumaado.
Xagga rabbaaniga ah ee Ponivez, codsigani waa hallakh, sidaas oo kale waa hadal la'aantiisa, waxaa cad in uusan dhihin ammaanta halakhah dartiis iyo sidoo kale tuuggu ma uusan dhihin sabab la mid ah fikraddiisa,
Waxa kale oo cad in aad leedahay Hillel waayo sidaas ayaa lagu go'aamiyay xalaqadii, sida aanad odhanayn haddaanu jirin.
Marka laga hadlayo daabacaadda kormeer la'aanta Israa'iil, mar labaad sababta ay u caawiso iyo cidda,
"Duco aan la jawaabin," waa inay ahaataa mid aad ugu dhow in dadka Israa'iil loo soo dhawaado Ilaahooda oo lagu xidho iyaga oo abuuraya.
Taasna, sidoo kale, xaggee ka timid?
Waxaan u ooyayaa daandaansigan oo kale, nin caqli leh ayaad tahay, bal ii sheeg khibradaada lidka ku ah.
Dareen kuma doodo. Qof kasta iyo dareenkiisa.
Xitaa haddii sida aad tidhaahdo wax walba way dhaceen (oo tani run maaha), su'aashu weli waa maxay sharcigani ka tarjumayaa. Malo-awaalkan ayaa ku dhex jira.
Daabacaadda aan la ilaalin waxay si weyn u caawisaa kuwa dareemaya in lagu shaqeynayo sidaas darteedna ka tagaan dhammaan dhaqanka. Waxaan la kulmaa daraasiin iyaga ka mid ah. Kuwa hela nuxurka la aqbalay waxay sii wadi doonaan inay naftooda ku qiimeeyaan fariimaha caadiga ah. Dareenkaygu waa in qof u baahan yahay inuu wax ka qabto xitaa kuwa si toos ah u fekeraya. Sidoo kale waa qayb mudan in la tixraaco. Sheegashada runta ahi maaha mid muhiim ah ee waa danayn kaliya ee nacasyada tuulada, iyo siyaasadda quduuska ah ee beenta ah ee beenta ah ee beenta ah in aan runta daabacin, waa tan keentay in aan weyno wiilasheena ugu fiican oo aan la joogno kuwa cuna luquntaas. Tani waa waayo-aragnimadayda ka soo horjeeda. Waad waydiisay, sidaas ayaan ku idhi.
Xagga ku dhegganaanshaha ilo qadiimi ah oo ka soo horjeeda runta cabsidaada oo kale, ma haysto wax aan ahayn inaan Gemara ku keeno Yoma Set AB:
Damar Rabbi Yehoshua Ben-Lewi: Waa maxay sababta loogu yeero xubnaha Knesset - kuwaas oo soo celiyay taajkii sharaftiisii ​​hore. Markaasaa Cata Muuse wuxuu ku yidhi ninkii weynaa oo laga cabsado oo ahaa Ata Yeremyaah, oo wuxuu ku yidhi, Shisheeyayaal reer Karkiriin ah oo macbudkiisa jooga? Ma dhihin wax laga cabsado. Ata Daniel, wuxuu yiri: Ajaanib baa wiilashiisa addoon u ah, Aaya geesiyaashiisii? Ma odhan geesi. Isaga lama joogo oo waxay yiraahdeen: Laakiin, waa geesinimada geesinimadiisa oo ka adkaata dareenkiisa, taas oo sii dheereysa kuwa xun. Oo kuwanuna waa cabsidiisa - in Ilaaha barakaysan la'aanteed ka cabsan, sidee hal qaran quruumaha dhexdooda uga dhex jiri karaa? Rabbanan Hichi waa addoonkayga iyo kan ugu muhiimsan Teknat Datkin Moshe! Rabbi Elazar wuxuu yiri: Mar haddii uu ku og yahay kan barakeysan inuu run yahay, sidaas darteed been uma ay sheegin.
Waxaan u janjeeraa inaan caddeeyo sheegashadayda oo aanan ka soo saarin ilo kala duwan, Leibowitz (kaas oo aanan ku raacsanayn wax ku dhow) ama cid kale. Haddii aad u aragto isu ekaanshaha iyaga iyo Leibowitz waa go'aankaaga, laakiin shaqo kuma lahan dooda lafteeda. Waa wax laga xumaado in qof kasta oo dadka wacdiya si uu u sameeyo aragtiyo adduunyo sida halku-dhigyada dadka kale uu ku eedeeyo kuwa kale dabeecadda noocaas ah. U-reebitaanka Momo.
Yacni, umalayn maayo in arzaaqadda iyo ducadu ay ku jiraan qaybta beenta xurmada leh.
Markaa waxaan ku weydiiyey xageed ka timid.
Gebi ahaanba waa ku raacsan yihiin in dadku ay waydiiyaan ama ka labalabeeyaan in la sheego runta [iyo daraasiin ka mid ah kuwan oo kale ah kuma jiraan wax caddayn ah oo dhan iyo ku saabsan kormeerka gaarka ah iyo ducada gaar ahaan inta badan ee rumaystayaasha ah ay dareemaan daawashada isha iyo ilaalinta gaarka ah ee qof kasta
U malayn maayo haba yaraatee in kormeerka gaarka ah iyo ducadu ay qayb ka yihiin su'aalaha ku saabsan ka sheegidda runta ama maqnaanshaheeda iyo waxyaabaha u baahan waxyiga.
A] sababtoo ah looma baahna in la yiraahdo waa sidaas,
B] sinaba wax uguma soo kordhin,
J] Haddii Ilaahay u gargaaro qof aan waxba galabsan oo uu samayn waayo, waxaad dhab ahaantii ku eedaynaysaa inuusan ku dul istaagin dhiigga deriska [waa run inuusan deris ahayn,] fikir ahaan.
Waa inaad go'aansataan in sheegashadaadu tahay nuxurka arrinka, in waxa aan sheegayo ay tahay mid aan run ahayn, ama aad ku andacoonayso in aan been sheego "been quduus ah" si aan u xumaanin iimaanka aan waxba galabsan ee dadka.
Waxba Ilaahay kuma eedayn. Wuxuu abuuri karay aduunkan aan lagu maamulin sharci laakiin wuxuu go'aansaday (oo malaha isaga la dhadhamiyay) inuu u sameeyo si waafaqsan sharciga. Si kastaba ha ahaatee, ma u malaynaysaa inuusan wax ka tari karin Holocaust ama masiibo kale? Haddaba muxuu u caawin waayay? Maxaad u malaynaysaa in aan adiga kugu canaanan karo isaga? Iyo in aan dib u cusbooneysiiyay in dadku ku dhibtoonayaan adduunka?
Laakiin waxyaalahan oo dhan si fiican ayaa loogu sharxi doonaa buugayga.
Aad ayaan u caddaaday,
Marka hore, ma arag sheegashadaada oo kale oo ah in aanay jirin wax kormeer ah oo dhan,
Mana u malaynayo inay tahay been muqadas ah, haddii ay dhab tahay maxaa diidaya in sidaas looga tago.
Dhanka sharciyada, diyaarinta sharciyada abuurista oo aan isbedelin, tusaale ahaan waligeed ma jirin kormeer, ama sharciyo leh taariikho?
Sida Holocaust, iwm, haddii wax walba waa sida xisaabta, markaas anigu ma aqaan xisaab, laakiin ma khilaafi doono iimaankayga fudud iyo culays la'aan.
Haddi aanay jirin xisaab [kormeer] dib ugu celin Kushia ilaa Dukhta,
Haftarah malaha dhadhan ayuu leeyahay,,,,
2. Waxaan sharaxay sababta aan uga tagin.
3. Shuruucda dabiicadda oo markii aan la garanayn Ilaahay isu daayey in uu in badan ka leexdo, oo waayahaan la yaqaannay malaha sidaas ma yeelo.
4. Wax su'aal ah may jirin, meelna may jiidi jirin. Haddaad u malaynayso wax kasta oo dhaca inay xaq yihiin (hadaad fahmi waydo mooyaane), haddaba maxaad igu adkaynaysaa? Ka dib oo dhan, xitaa haddii, aniga aragtidayda, wax walbaa aan laga fiirsan, haddana waxa dhacaya waa dhab ahaan waxa dhici doona, markaa waa maxay dhibka Ilaah, aniga aragtidayda? Ka dib oo dhan, ma jiro qof la il daran waxa uu mudan yahay.
29 Elul 09 - 2016/15/07 saacada XNUMX:XNUMX
Aamiin yaa Rabb Michael
Sidaa darteed, waxaa laga yaabaa inay wanaagsan tahay in tani dhacdo, dhibaatadu waxay ka timid Tawreed ee nebiyada iyo Qorniinka, iyo cudur daarka ah in ay jiraan arrimo dheer oo keliya oo Talmud ah ayaa ka soo horjeeda arrinta, dhibaatada tababarka Chazal.
Si fiican ayaan u sharaxay sababta haa uga tag
Su’aashu waxay tahay, maxaa loola jeedaa, “ma macno ka duwan buu leeyahay” mise caqli kale?
Midda koowaad waa wax aan macquul ahayn, tan labaad, haddii aysan la xiriirin abaal-marin iyo ciqaab sinaba [ma jiraan abaal-marin iyo ciqaab?] Haddii aysan jirin xisaab [kormeerid] markaa malaha maaha, markaa maxaa dhab ahaantii ka tagay .. waxaan isku dayaa in la qiyaaso mala-awaal aan guul lahayn,
Nabadda Capricorn. Waxaan u maleynayaa inaan daalnay.
29 Elul 09 - 2016/15/08 saacada XNUMX:XNUMX
Dhab ahaan halkan maan dareemin daal,
XNUMX-kiina waxaan ku farxi lahaa jawaabaha qaar ka mid ah tuducan aan qoray
Su'aashu waxay tahay, maxay ka dhigan tahay, "macne kale ma leeyahay?"
Ma hubo in aan fahmay sababta waxyaabaha halkan loola jeedo. Waxaan filayaa inay ka hadlayso sababta uu Ilaahay dunida u abuuray in sharci lagu maamulo. Waxaan soo jeedin karaa hal dhadhan, tusaale ahaan inuu doonayo inaan awoodno inaan nafteena jihaynno adduunka. Haddii aan si sharci ah loo fulin ma awoodid inaad saadaaliso waxa dhici doona xaalad kasta mana awoodid inaad noolaato.
Wax kasta oo kale oo aad qortay runtii ma fahmin. Laakin fadlan hadii aysan jirin waxyaabo cusub oo dhab ah, halkaan ayaan ku dhamaaneynaa. Waxa caado ii ahayd in aan mar walba ka jawaabo email kasta, laakiin boggani waxa uu iga rabaa wakhti badan, in badan oo ka mid ahina waa soo noqnoqda waxyaabo la qoray oo la yidhi.
29 Elul 09 - 2016/15/09 saacada XNUMX:XNUMX
Sida muuqata runtii waxaa jira jahawareer u dhexeeya emails-ka halkan sababtoo ah runtii ma fahmin sababta aan u daalnay xaftar markii aanan isku celin xitaa hal mar.
Waxaan soo gelin doonaa waxaad qortay mar labaad oo ka jawaabi, halkan,
Rabbi Makal ayaa qoray ,,,
1. Haddaba? [Waxay ahayd mid la xiriirta aqoonta shakhsi ahaaneed]
2. Waxaan sharxay sababta aan uga tagin.
3. Xeerarka dabeeciga ah oo markii aan la garanayn Eebbe u oggolaaday in uu ka sii leexdo, waayahan dambena la yaqaanno malaha ma sameeyo.
Waxaan ugu jawaabay,
1] Sidaa darteed waxaa laga yaabaa inay wanaagsan tahay in tani ay tahay kiiska, dhibaatadu waxay ka timid Kitaabka Quduuska ah oo loo qoray si liddi ku ah iyo in la sheego in ay jireen saacad keliya iyo muddooyin is khilaafsan arrimo dheer oo Talmud ah, dhibaatada tababarka xikmaduhu ma istaagi doonaan su'aasha,
2] Anigu waan sharraxay oo aan soo koobayaa, uma maleynayo in kormeerka iyo ducadu ay qayb ka tahay su'aalaha iyo xalalka ku saabsan ka sheegidda runta ama maqnaanshaheeda ku wajahan daraasiinkaas aad sheegtay inaad dareemayso in laga shaqeeyo gaar ahaan marka aan loo baahnayn. dheh waa sidaas,
4] Waxaad qortay in laga yaabo in Gd uu leeyahay qodob go'aankiisa ah inuusan daawado oo aan ka hor imanayn su'aasha mas'uuliyadda quseysa isaga.
Waxaan weydiiyay, haddii dhadhankiisu yahay wax aynaan garanayn, caqli-gal kale, waxay u egtahay wax aan macquul ahayn,
Haddii dhadhanku yahay shay aan la aqoon laakiin macquul ah laakiin aan la xiriirin abaal-marin iyo ciqaab [iyo haddii aysan jirin xisaabin iyo kormeerid markaa malaha malaha] anigu halkan dhinac uma arko,
Adigu isku soo celceli.
1. Waxaan idhi dhib iguma aha in qofna sidayda oo kale odhan. Waa maxay sababta aan sharaxaad ka bixiyo?
2. Oo waxaan sharaxay sababta haa u dhaafo. Waxaan sheegay in aan la kulmay dad badan oo ducadooda iyo kormeerkooda ay ahaayeen arrimaha dhabta ah. Maxaa halkan ka soo cusboonaaday?
3. Waagii hore cilmiga lama aqoon, dadkuna ma yaqaaniin sharciga dabiicada. Sidaa darteed waxay u badan tahay oo dabiiciga ah inay ka leexdaan iyaga. Maanta waa naqaan iyaga. Tusaale ahaan, waxay u malayn jireen inuu roobka da'ayo amarrada aawadood. Maanta waxaan horay u ogaanay inta roob ee da'ay iyo goorta, iyo in ay ku xiran tahay sharciyada saadaasha hawada ee ma aha mitzvos.
4. Ma fahmin meesha aan ku qoray in Ilaah leeyahay sabab uusan u daawan. Waxa aan qoray in aanu daawanayn. Dhadhanka? Malaha xaqiiqda ah in aan horayba u nahay caruur waaweyn oo aan la siin gacan. Laakiin iyadoon loo eegin aragtiyaha, su'aasha dhabta ahi waxay u badan tahay inuu dhab ahaantii kormeero? Fikradayda - maya.
Haddana waxaan qorayaa inaan daalnay.
Rabbi Makal ayaa qoray
Laakiin wuxuu go'aansaday (oo malaha dhadhamiyey isaga) inuu sameeyo si waafaqsan xeerarka.
Malaha xaqiiqda ah in aan horayba u nahay caruur waaweyn oo aan la siin gacan.
Hadaba waa taas jawaabtu adiga oo aan u istaagin dhiig walaalo ah caruur waaweyn ????
Haddi ay sidaan tahay dhabtii waanu daalnay laakiin kaagama shakisnid indhihiisa sharci aan sal iyo raad toona lahayn maadaama marar badan halkan la igu eedeeyay.
Nabadda Capricorn. Waxaad ku celisaa mar kale waxyaalihii hore looga hadlay gunta.
Waxaan hore kuugu sharraxay waaberiga la'aanta ee sheegashada "ma taagnaan doontid" taas oo si isku mid ah adiga kugu socota.
Runtii ma jecli, laakiin aniga waan dhammeeyey.
Sarreeye waxa uu yaqaan sida loo akhriyo sadarrada dhexdooda
Waxaan ugu jawaabay, Mushahar iyo Ganaax baan haystaa, sida Xisaabta loo maamulo anigu aqoon uma lihi,
Laakin ha soo dhexgelin marka aad dhiig baxayso sababtoo ah waad dhimanaysaa, ??. ??
Haddaad dhammaatay,,,, ka dib nolosha,,
Rabbigu miyaanu u arkin ku soo laabashada reer binu Israa'iil ee dhulkiisa ka dib laba kun oo sano oo qax ah iyo isla markiiba ka dib saddex sano ka dib markii uu dhammaaday Holocaust mid ka reeban dabeecadda? Miyaanay ahayn in taas loo nisbeeyo qaddarka Eebbe?
Ku soo noqoshada dadka Israa'iil ee dhulkooda runtii waa dhacdo aan caadi ahayn oo ku saabsan heerarka taariikhiga ah, laakiin taariikhdu waa shay adag mana jirto si loo ogaado haddii ay jirto faragelin rabaani ah halkan. Guud ahaan waxaan qabaa in habkan si wanaagsan loo fahmi karo xitaa iyada oo aan loo baahnayn ka-qaybgalkeeda. Dadka cilmaanigu way arkaan habkan mana jabiyaan caqiidadooda cilmi-la'aanta ah.
Sidaa darteed, gunaanadka "mucjiso taariikhi ah" waa shay aad khatar u ah oo aan lagu qanci karin. Tani waa laga yaabaa inay ka duwan tahay mucjisada jireed.
Iyadoo laga yaabo inay miisaan ku yeelato xaqiiqda ah in nebiyadu ay horay u sii sheegeen dadka ku soo laabanaya dhulkooda, iyo macnaha waxaa jiri kara meel lagu arko habkan oo ah calaamad muujinaysa ku lug lahaanshaha rabaaniga ah. Ma garanayo. Waxa kaliya oo aan ogahay in xitaa haddii aysan taasi dhicin ku dhawaad ​​qofna uusan xifdin lahayn Kitaabkiisa (ugu badnaan waxay dalban lahaayeen aayadaha khuseeya oo ay ka saaraan fududaantooda), markaa way igu adagtahay inaan u nisbeeyo miisaan xisaabeed oo aad u sarreeya. waxsii sheegyadan. Qoraal aan u adkaysan karin imtixaanka diidmada sidoo kale maaha mid aad u cajaa'ib leh marka ay run noqoto (ka dib, waxaa jiray waxsii sheegyada aan run ahaantii run ahayn oo qofna kama cabsanin). Intaa waxaa dheer, waxsii sheegyadan laftooda ayaa ka qayb qaatay geeddi-socodkii laftiisa (mahadsanid taas oo aan halkan ku soo laabannay). Waa wax is-sheegid, macno ahaan.
29 Elul 09 - 2016/15/11 saacada XNUMX:XNUMX
Waxay ila tahay in Kikro lagu yiraahdo / af Cibraaniga lagu qoro. Sidoo kale, oraahda magaciisa waxay la xiriirtaa Publius Trentius Ash.
Oh, uma malaynayn in isla markiiba la daabici doono laakiin waxaa loo diri doonaa tafatiraha goobta. Waad tirtiri kartaa faalladan iyo tii ka horreysay.
Runtii way ii timaadaa, laakiin kombayutarkaygu si dhib leh ugama jawaabo. Markaa waan oggolaaday daabacaadda oo hadda uun baan awooday inaan soo diro jawaabtayda. Iyadu waa:
Maxaa loo tirtiray? Laba faallood oo dhammaan akhristayaashayada ay tahay inay wax ka bartaan. Marka hore ma hubo. Magaca Laatiinka waa Cicero, mana arko sababta loogu dhawaaqi karo magaca loo beddelayo. Haddii qof Maraykan ah lagu magacaabo David, ma ugu yeedhaa Cibraaniga David. Uma maleynayo.
Oo anigu maan fahmin gabi ahaanba sababta loogu turjumay Laatiinka C daayeer Cibraani ah (sida Kaysar halkii Kaysar ee asalka ahaa).
Dhanka labaad, aad baad u mahadsantahay. Muddo sanado ah waxaan moodayay inay qalloocan tahay. Hadda waxaad tahay horyaal iyo rabbi aqoon leh.
Waxaan sidoo kale soo diray jawaabtaada labaad, laakiin waa kaliya in la helo waqti macquul ah. Haddii aad aragtay in kii hore uu si toos ah u yimid goobta (sida aad u malaynayso), markaa waxay ahayd inaad fahanto in kan labaad uu la mid yahay. Sidaan soo sheegnay, labadoodaba waan oggolaaday in la shubo (sidan ayaa software-ku u dhisan yahay in wax walba ii yimaadaan). Wax walba waan oggolaaday, marka laga reebo waxyaabo aan u qalmin (kuwaasi oo intii ay jirtay BH aysan jirin).
Labadayadaba awoowayaasha (P. Property Tawraad, c):
Qofka cutubkiisa ka barta cutub ka mid ah cutubka ama hal xalax ama hal aayad ama mid shinni ah xataa hal warqad ha ku ixtiraamo isaga, waayo waxaan ku amarnay Daa'uud oo ahaa boqorkii Israa'iil oo aan Axiitofel wax ka baran ee laba shay oo keliya akhriyay oo akhriyay in la yidhi iyo aqoon leh oo aan fududayn iyo maadi iyo wixii David Melek Israa'iil oo aan ka baran Ahithofel laakiin laba shay oo kaliya ayaa akhriyay Rabbi Alufu iyo aqoontiisa oo ka barta qoraagiisa hal cutub ama hal halakh ama hal aayad ama hal shinni xitaa. Hal xaraf oo ku saabsan intee iyo intee le'eg ayaa la ixtiraamaa oo aan sharaf lahayn, laakiin Tawreed ayaa yidhi + Maahmaahyadii XNUMX: XNUMX + Murtidii sharafta lahayd waxay dhaxli doontaa Sheem / Maahmaahyadii / XNUMX Y waxaa la yiri + Shem / Maahmaahyadii / XNUMXb
Iyo sidoo kale BM Lag AA:
Ha Rabbanan: Rabbi yaa yidhi - Rabbi caqli bartay, ee ma aha Rabbi kii bartay Baybalka iyo Mishnah, erayadii Rabbi Meir. Rabbi Yehuda wuxuu yidhi: Dhammaan xigmaddiisu waa sax. Rabbi Yossi wuxuu yidhi: Xataa indhihiisa ma iftiimin marka laga reebo hal mishnah - kani waa rabigiisii. Raba wuxuu yiri: Sida rabbaani badeecada, Dasburn Zohma Listron.
Iyo in ay habboon tahay in ardaygu tirtiro erayada sayidkiisa, halyeeygiisa iyo aqoontiisa?
Aad baad ugu mahadsantahay bogaadinta la buunbuuniyay xoogaa :). Waxaa laga yaabaa inaan halkaan ka soo qaato cashar aan ugu mahadceliyo rabbii tobaneeyo xisaabiye ah. Aad baad ugu mahadsan tihiin muxaadarooyinkii iyo qoraaladii aad ii soo bandhigtay ee albaabada iiga furay dhinacyo badan, kuna tayeeyay aqoonteyda dhinacyo badan, waxaan ugu yeeri doonaa “Caddaynta Shukulaatada” 🙂), aragtidayda balaadhisay, iyo mararka qaarkood naftayda u hindisay fasax.
Oo si sax ah sababtan awgeed, ma aanan rabin inaan "barto Halacha" rabbi. Oo waxaan soo jeediyay in la tirtiro, mar haddaan u maleynayay inay ku filan tahay in la saxo jidhka maqaalka haddii rabigu u arko inay ku habboon tahay, wax dhib ah kuma laha muuqaalka falcelinta lafteeda. Sidoo kale, sida la sheegay, waxaan dareemay raaxo la'aan ku tilmaamaya burush luul ah oo qalad ah, haddii runtii ay tahay qalad.
Run ahaantii, inta aqoontayda ah, ku dhawaaqida Laatiinka dhab ahaantii waa cicero (Ingiriisi casriga ah, malaha mufakiriinta ayaa qalloocantay). Su'aasha ka timid Daa'uud waxay soo bandhigaysaa dhib marka ay timaado magaca la og yahay in uu asal ahaan ka soo jeedo laakiin ay si kale u adeegsadaan dhaqamada kala duwan, sidoo kale waxay dhalinaysaa mushkilad xagga adeegsiga magaca oo isku xigxiga ama erey isticmaalaya shay waliba macnihiisa. Laakiin waxay iila muuqataa in naanaysta Chitsro, haddii runtii laga aqoonsado Israa’iil, aanay ahayn mid awood badan, oo aanay qaadin dacwad dhaqameed oo ah in isticmaalka cicero ay noqon doonto mid aan dadku fahmi karin ama ay ka joojinayaan macnaha magaca. . Waxa kale oo ay iila muuqataa in marka la eego qawaaniinta tarjumaada ee la aqbalay maanta isticmaalka foomka Tsizro waa la dhimay.
Dhanka maaweelada macquulka ah, sida qofka, sida la sheegay, waa inuu sidoo kale u mahadceliyaa qayb badan oo ka mid ah aqoontayda dhinaca caqliga, waxaan rajeynayaa inaan wax ku filan ka bartay si aanan ugu guuldareysan doonin wax yar oo noocaas ah. Waxaan u qaatay in jawaabtayda labaad si toos ah loo daabici doono, laakiin maan ogayn si kale oo aan ku muujin karo rabitaankayga ku aaddan in qofka koowaad la tirtiro, marka laga reebo jawaabteeda, taas oo aan ku sheegay in aanan rumaysnayn in habkani yahay daabacaad degdeg ah. Waxaan u qaatay in aakhirka qof tan aaminsan uu arki doono iyaga, iyo codsiga tirtirka ee dhawaan la sheegay.
Mar labaadna aad baad u mahadsantahay.
Waxaa caado ka ah aabbahay dhintay (oo bartay Laatiinka) in ku dhawaaqistiisu asal ahaan ahayd Tszero (iyo Kaysar). Halkan, sidoo kale, waa horyaal iyo rabbi aqoon leh. 🙂
21-kii Shivat 02 - 2017/14/43 saacada XNUMX:XNUMX
Waxaad ku andacoonaysaa in xitaa haddii aad ka soo saari karto bayaan qiimo ballaadhan oo sharci ah, kuma xidhna.
Anigu, sidoo kale, waxaan haystaa (ilaa xad wali) aragtidan, oo sidaas darteed ma dareemayo inay ku qasban tahay in aan ku dhawaaqo isirnimada ama nacaybka ka soo baxa diinta Yuhuudda (sidoo kale, waxaan ahaa - iyo ilaa xad weli) ku dhaqma minimalism tarjumaad ah oo sheeganaya in ay jiraan ma aha "hadal qiimo leh" oo ku jira halakhah.
Laakiin waayadan dambe waan jilcay oo waxaan u muuqdaa inaan qirto odhaaho qiimo leh oo laga yaabo inay ka jiraan aragti ahaan (diidmada deymaha dulsaarka, rabitaanka boqortooyada, aasaasida Macbadka, rabitaanka in qof kasta oo adduunka ku nool uu ka hooseeyo diinta Yuhuudda), sidaa darteed qofka aan yaqaannay ee u malayn Ilaah wuxuu rabaa inaad wax sameyso, inkastoo uusan si cad u amrin, maxaad u sameyn weyday (yacni laba arrimood ayaa isbedelay - 1. Waxaan gartay in hadal qiimo leh oo aan la aqbali karin uu soo baxay 2. Waxaan ku qanacsanahay in hadalada Shittinku ay yihiin xirid).
Haddii su'aashu ay aniga oo keliya aniga iga ahayd, waan dhegaystay, laakiin culumadeennu waxay hore u caddeeyeen in doonista Ilaah ay si gooni ah uga go'an tahay Tawreed - waajibka ah in la dhegeysto erayada xikmadda sida loo yaqaan "(marka aakhirka Hasbra waa qiyaas lagu caddaynayo doonista Eebbe).
Taasi waa, ka dib markii aan qirtay in doonista Ilaah ay tahay shay adag, waxaa la igu dooday in maskaxda xikmadda - ugu yaraan edbinta 'akhlaaqda' (ma aha macnaha anshaxa dabcan, laakiin sida shirarka anshaxa) - waa a Waxay u badan tahay inay khabiir ku yihiin fahamka Halacha iyo istaagitaanka doonista Ilaah, oo udub dhexaad u ah, waxay u badan tahay inay yihiin khabiiro fahamka waxa doonista Ilaah tahay Tannaim iyo Amorayim, kuwaas oo sida muuqata aan isku dayin inay wax ka sheegaan, laakiin sidoo kale waxay heleen weedho qiimo leh oo noocaas ah).
Haddana naftayda su'aashaydu ma haysaa cudur daar aad kaga joogsato fulinta doonista Eebbe sida ay indhahaaga ugu soo degtay inaad ilaaliso Tawreed?
Haddii aan ka soo saari karo hadal qiimo leh oo ka yimid Tawreed waa hubaal in la iga filayo. Tani waa doonista Ilaah xitaa haddaysan ahayn run ahaantii Halacha.
Laakiin hadalka qiimaha leh ee ka soo baxa xikmad ma aha mid adag. Fikradayda, xikmaduhu maaha khabiir (ma aha sida aad u qortay). Awoodda xikmaddu kama imanayso inay saxan yihiin, laakiin waxay ka timid xaqiiqada ah inaan helnay awooddooda (eeg Ks. Waxaa jira sababo aad u wanaagsan tan, laakiin maaha sababtoo ah waxay yihiin khabiiro. Oo hadda waxaad fahmi doontaa in aan helnay awooddooda arrimaha xalaasha ah laakiin aan ahayn meta-halakhic ama arrimaha qiimaha. Haddii ay go'aansadeen in ay ku daraan hal-abuurnimo (sida ku-talaxtagga heerka seediga iyo wixii la mid ah) ayaa nagu waajib ah. Dabcan, haddii aan ku heshiinno, waan sameyn doonnaa, laakiin haddii kale, lagama maarmaan ma aha in sidaas la sameeyo. Taa lidkeeda, waa lagama maarmaan in si sax ah loo sameeyo lidkeeda sababtoo ah Hasbra waxay leedahay xaalad xidhitaan.
Oo waxa doonista Ilaah looga baahan yahay maaha madaxdii yeshivot ee wax aasaasay laakiin waxay ka yimaadeen Gemara iyo kuwii hore oo dhan, arrimuhuna waa qadiimi. Inkasta oo ay jiraan khaladaad kala duwan oo arrintan ku saabsan sidoo kale, oo arag maqaallada halkan ku yaal bogga sharaxaadda: http://www.mikyab.com/single-post/2016/06/21/%D7%A2%D7%9C-%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%9F-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99
Iyo walxo dheeraad ah
25 Sivan 06 - 2019/15/38 saacada XNUMX:XNUMX
BSD XNUMX ee Sivan A.T.
Ku saabsan doodaha u dhexeeya rabbaaniyiinta ee mawduuca samaynta maalin loogu talagalay xusuusta Holocaust - fiiri maqaallada Rabbi Shmuel Katz, 'Halaagga iyo Xusuusta' iyo 'Maalinta Holocaust ee Kowaad', iyo maqaalka Rabbi Yeshayahu Steinberger, Boogta Kahor Bogsiinta. Saddexduba waxay ku yaalliin bogga 'Shabbat Supplement - Makor Rishon', iyo jawaabaha aan ka bixiyay maqaallada kore.
24 Kislev 12 - 2019/12/23 saacada XNUMX:XNUMX
Waan ka cudur daaran doonaa horraantii markaan akhriyay nuxurka ku jira boggan markii ugu horeysay, mana garanayo in su'aalahayga ama jawaabaha iyaga ay ku soo baxeen maqaallada ama su'aalaha jawaab-bixiyeyaasha halkan.
1. Haddii aad u malaynayso in Ilaah joojiyay faragelinta waxa ka dhacaya adduunkeena, waxaad si kooban ugu sharaxi kartaa fikradaha aasaasiga ah ee diinta Yuhuudda sida
B. Abaal-marin iyo Ciqaab - Waxay iila muuqataa in Maimonides (waxaan wax ka qorayaa xusuusta ee ma aha inaan dib u eegis ku sameeyo buuga) wuxuu sheeganayaa in dariiqa dabiiciga ah ee aduunka lagu dhaqmo iyada oo ay sabab u tahay habdhaqanka gaarka ah ee Yuhuudda sida oo aan ku siiyay kaaga. roobka wakhtiga iwm.
2. Ma kula tahay in la tukado 3 jeer maalintii in ay noqotay wax aan loo baahnayn waayo cid la hadasha ma jirto? Waxaas oo dhami ma yihiin eedeymo xalaal ah oo laga faaruqiyay malaha sababta ugu weyn ee aad baahidaada weydiiso qof ku siin kara?
Suurtagal ma tahay in laga tanaasulo Rosh Hashanah oo dadka dunida jooga oo dhammu ay hortiisa maraan sida ina Meeroon?
4. Sharaftiisa miyuu u malaynayaa oo anigu uma jeeddo inaan Khuubo barbar dhigo isagoo sheeganaya kuwa u maleeyay Shiva inuu seexday? Mise adduunkiisii ​​ka tagay?
Haddii arrimuhu mar hore lagaga wada hadlay goobta, waan ku farxi lahaa inaan dejiyo tixraac ku saabsan meelaha khuseeya haddii wakhtigaagu kuu oggolaan waayo inaad faallo ka bixiso.
24 Kislev 12 - 2019/17/22 saacada XNUMX:XNUMX
Waxaad waydiinaysaa su'aalo badan oo ballaadhan wayna adagtahay in halkan wax looga qabto. Waxaad ka heli doontaa dhammaan waxbariddeyda ku saabsan kuwan iyo mowduucyo kaleba saddex-geesoodka cusub, iyo mowduucyadan buugga labaad (No Man Is Ruler in the Spirit). Intaa wixii ka dambeeya waxaad sidoo kale ka raadin kartaa bogga halkan oo aad ka heli kartaa tixraacyo aad u badan mid kasta oo ka mid ah su'aalahan.
Yahuudi dibad joog ah
Arbaca gudaha Tammuz 25 - 06/2020/15 saacada 19:XNUMX
1) Marka laga hadlayo isku-duubni la'aanta xukunka Maimonides iyo wixii la mid ah, shaqo kuma lahan meta-halakhah, laakiin qeexida halakhah waxaa lagu sameeyaa hab gaar ah laakiin xukunkeedu lama xidhiidho (laga yaabee inuu xitaa noqon karo) sheegay in aanay daruuri ahayn xidhiidh).
Tusaale ahaan: "AR Acha Bar Hanina waa mid muuqata oo la og yahay hortii kii yiri oo ahaa aduunka in aan jiilkii Rabbi Meyr qof la mid ah ka jirin ee muxuu u dhisi waayay hal-abuur isaga oo kale ah oo asxaabtiisu ay u istaagi waayeen aakhirka. ee ra'yigiisa in uu sheegay oo ku saabsan nijaasta daahirka ah oo uu tuso isaga waji saafi ah Waxaan aragnaa in inkasta oo xikmaduhu ay ogaadeen in rabbaani caqli-gal ah (iyo malaha xaq iyaga) ma xukumin halakhah la mid ah.
Sidoo kale isla bogga (Eruvin XNUMX :) sababta ayaa ah in Halacha Kavah la siiyay inkasta oo Shabash ay soo afaysteen Tapi oo ay sabab u tahay is-hoosaysiintooda oo iima muuqato in qof uu u maleynayo in is-hoosaysiinta ay qasab tahay inay mar walba keento runta. run (inkasta oo marar badan arrimuhu noqdaan kuwo fiiqan oo cad).
Fikradayda, waxaa aad u cad in mufakiriinta (ka duwan garqaadayaasha…) ee xalaqadu ay u socdeen si cad oo joogto ah, ka dib, waxaan helnay dhowr iyaga ka mid ah oo aan inta badan xukumin iyaga oo kale oo kaliya dhowr xaaladood oo jecel yihiin. iyaga. Si kale haddii loo dhigo, ma jirto wax macno ah odhaahda ah in Maimonides aanu lahayn joogteynta meta-halakhic sababtoo ah waxaa macno ku jira xukunka meta-halakhic.
2) Raabbigu wuxuu go'aansaday sabab qaar ka mid ah in mucjiso ay tahay inuusan lahayn wax suurtagal ah oo uu ku jiro faragelin la'aan. Xageed ka keentay qeexiddan?
Cajiibka ra'yiga noocaas ah ayaa ah in qof kasta oo waligiis gacantiisa ku haystay Kitaabka Quduuska ah ay caddahay in kasta oo mucjisooyin kasta oo halkaas ku jiray ay ku dembaabeen kafaaraggud iyo fallaago (sida uu yiri Raabbi waagii ay mucjisooyinku dhaceen) iyo haddii aan nidhaahno mucjisooyin waa wax aan dhici karin markaas ayaanu nidhi jiilashaas oo dhami waxay ahaayeen koox doqomo ah (Don Ku iyo waxa maanta towbad keena tobanaan kun oo ay sabab u tahay "mucjisooyinka" Baba iyo charlatans iyo xitaa kuwa ka sii badan kuwa diiniga ah oo aan dembi u gelin. Cabsida ciqaabo aan iyaga ka arkin Ku ina Ku ina oo markaas aan dembiilayaal ahayn).
Waxaan u maleynayaa in mucjiso ay tahay itimaalka tirakoobka hooseeya ee dhacaya sidaas darteed waxaa jira furitaan loogu talagalay kuwa beeniya (xitaa waagii nebiyada) si ay u sheegaan in tani ay tahay mid dabiici ah oo aan mucjiso ahayn. Sidan oo kale ayaynu qarnigeenna calaamooyin ugu leennahay. (Waan ka warqabaa dhibka sheegashadan, sababtoo ah waxaa soo baxday in horumarinta cilmiga, waxyaalihii hore loo tixgeliyey shir sababtoo ah daciifnimada maanta waanu ogaan doonnaa. Laakiin weli waxyaabo badan ayaa jira - marka dadku waxay ku noqdaan dalkooda hooyo
3) Raabbigu wuxuu qoray “Laakin uma maleynayo inay gunta u galeen macnaheeda. Ujeeddada Raabbigu waxay ahayd inuu sheego inuu yahay Sionist cilmaani ah, sida Ben-Gurion oo kale."
Waxaan u mahad naqaynaa rabbii sida uu ugaftan iyo majaajilada u taagay ereyadiisa. Waxay jilcisaa akhriska….
(Ma aaminsani inaad tan aaminsan tahay).
Arbaca gudaha Tammuz 25 - 06/2020/15 saacada 28:XNUMX
Wax kasta oo aad halkan ku qortay meelo kala duwan ayaan ku kordhiyay.
1. Mar dambe ma xasuusan waxa uu ka hadlayay ( maxaa labis la'aan ah). Laakiin xagga xukunka Knesset, waxaan mar daliil u soo qaatay in halakuhu aanay had iyo jeer run ahayn balse ay leedahay qiimaha madax-bannaanida (in la xukumo sida aan u fahmay xitaa haddii ay aragtidayda tani run ahayn). Marka la eego BS iyo BH, faallooyinku way ku kala qaybsameen arrintan. R.I.Karo oo ku jira xeerarkii Gemaraa waxa uu ku macneeyay in is-hoosaysiintoodu ay runta u horseeddo (maxaa yeelay waxay markii hore tixgaliyeen kelmadaha B'Sh ka hor intaanay mawqifkooda dejin) Tuba dhawr tuducood ayaan ku dheeraaday.
2. Tan waxaan ku dheereeyay Tuba buuga labaad ee trilogy (iyo waliba halkan goobta oo dhowr meelood ah). Ma jiro xayawaan sida mucjiso dabeecadda dhexdeeda ah. Qofkii sidaas dhahaa wuu wareeray.
3. Ma rumaysni oo keliya, laakiin si buuxda ayaan u qanacsanahay. Rabbaankii ka yimid Ponivez wuxuu ahaa Sionist cilmaani ah.